သြဂုတ်လ နှင့် စက်တင်ဘာလ | Mahasi Sasana Yeik Tha
Home » Donation » 2017
Submitted by mahasi_editor on Wed, 01/17/2018 - 12:21
(1-8-2017) မှ (30-9-2017) ထိ
စဉ် အလှူနေ့စွဲ အလှူရှင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ လှူဒါန်းငွေကျပ်
၁ ဦးသိန်း+ဒေါ်ခင်လှ သားသမီးမြေးမြစ်များ ၊ အောင်လံမြို့။ ၁၀,ဝ၀ဝ
၂ ဦးအောင်မင်းဦး၊ အမှတ်(45)၊ ထီးတန်းလမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁၀,၀၀၀
၃ ဒေါ်ရင်ရင်အေးဖြူ၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၄ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဦးနန္ဒောဘာသ၊ သာသနာစာရ (၁၇) ကောင်းမှု ဆင်ပုန်းတောရကျောင်း၊ ဒေးစွန်ပါတောင်ခြေ၊ ပဲခူးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၅ ဦးထွန်းအောင် မိသားစု။ ၁၃၊ မြို့သစ်(၁)လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၆ ဦးလှသောင်း+ဒေါ်စန်း မိသားစု။ အမှတ်-၂၂၀၊ ၃၈ လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၇ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်စိန်ကြည်(၁)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ဖခင်-ဦးအောင်ကြီး၊ သမီး-ဒေါက်တာခင်မှတ်အောင် မိသားစု။ ၂၉၊ ဇေယျာသီရိလမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၁၅,၀၀၀
၈ မသင်းသင်းမိုး ကောင်းမှု။ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၄)၊ ပင်ရွှေတောင်လမ်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၉ ဦးအေးကို+ဒေါ်ခင်လေးကြူ မိသားစု။ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ဦးအောင်ကျော်စိုး+ဒေါ်အေးယဉ်မေ မိသားစု။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ဒေါ်အေးရီ မိသားစု။ ၂၅၀ (၃-လွှာ)၊ ငမိုးရိပ်(၈)လမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်ကျင်သန်း မိသားစု။ ၇/၆၈၊ သံသုမာ(၂)လမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၃ ဖခင် ဦးအေးမောင်+မိခင် ဒေါ်ခင်ညွန့် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်စိုးစိုးခိုင် မိသားစု။ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၄ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်နု (၆၈)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ။ ၆၀၁၊ ဆရာစံလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာ(၁)၊ သန်လျင်။ ၁၀,၀၀၀
၁၅ ကွယ်လွန်သူ ဦးဟန်စိန်၊ သား-မောင်မျိုးမင်းဦး တို့အားရည်စူး၍ "စိန်နဂါးဆေးဆိုင်" မိသားစု။ ကျောက်တန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ကိုရန်နိုင်+မသီရိဇံ၊ သား-မောင်သွင်အောင်ထွဋ် မိသားစု။ အမှတ်-၉/မြေညီ၊ မဟာဘောဂလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ကိုသာထူးဇံ+မမြင့်မြင့်မော်၊ သား-မောင်လင်းဥက္ကာ မိသားစု။ မန္တလေးတန်းရပ်၊ ပျော်ဘွယ်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၈ ကွယ်လွန်သူ ဦးသိန်းမောင်+ဒေါ်ခင်ကြည်၊ ဒေါ်တင်ရီ တို့အားရည်စူး၍ ဦးအောင်လွင်+ဒေါ်ခင်ခင်ကြီး မိသားစု။ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၉ ဒေါ်ကျင်ရီ မိသားစု။ အမှတ်(၁၆)၊ ၁၄-လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ မော်ကျွန်း။ ၅,၀၀၀
၂၀ ဒေါ်ခင်ညွန့် မိသားစု။ ရှမ်းစုကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂၁ ဦးစံတင်+ဒေါ်စိန် မိသားစု။ ရှမ်းစုကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂၂ မဟာစည်ဟိတေသီတရားပွဲအဖွဲ့ (အလုံ)ယောဂီများကောင်းမှု ၁,၀၀,၀၀၀
၂၃ ဖခင်-ဦးကြည်+မိခင်-ဒေါ်တင်ရီ တို့အားရည်စူး၍ ဦးကြည်လွင်+ဒေါ်ညို မိသားစု။ ဟိတေသီ၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ။ ၁၀,၀၀၀
၂၄ ဒေါ်လှမြသူ "မွေးနေ့အလှူ"။ ၅၃/ H-1 သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၂,၀၀,၀၀၀
၂၅ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ မဦးကျော့ယဉ် ကောင်းမှု။ ၅၃/ H-1 သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၆ ဒေါ်နှင်းဇံ၊ သား-ကိုသိန်းထွန်း မိသားစု။ ၅၃/ H-1 သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၇ ဦးထွန်းစိန်+ဒေါ်မြင့်မြင့်အုန်း မိသားစု။ အမှတ်(၅၈၅)၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၈ ဖခင်ကြီး ဦးကျော် အားရည်စူး၍ မိခင်-ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူ နှင့် သားသမီးများ။ အခန်း(၄၀၃)၊ တာဝါ/ B မလိခကွန်ဒို၊ ရတနာလမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၆၀,၀၀၀
၂၉ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးချစ်ရွှေ+ဒေါ်လှမောင်လေး၊ ကိုမြင့်သိန်း တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်တင်နွဲ့ မိသားစု။ မော်ကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၀ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အမေဒေါ်မြအေး၊ ခင်ပွန်း-ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ သား-ကိုညီညီ တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်ကြည်သိန်းနှင့် သားသမီးမြေးတစ်စု။ အမှတ်(၁၈)၊ ငုဝါလမ်း၊ ပုလဲမြို့သစ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ၁,၅၀,၀၀၀
၃၁ ဒေါ်ဥမ္မာအောင်၊ မောင်-ဦးတေဇအောင် မိသားစု။ ၁၄၆/ N-2 ၊ ခေမာသီရိ(၉)လမ်း၊ မရမ်းကုန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၂ ဦးဝင်းတင်အောင်၊ သား-မောင်သု မိသားစု။ ဗိုလ်တထောင်။ ၁၀,၀၀၀
၃၃ ဦးမျိုးမြင်အေ့ာင် မိသားစု။ ဗိုလ်တထောင်။ ၁၀,၀၀၀
၃၄ ဒေါက်တာအောင်ကျော်စိုး+ဒေါက်တာခင်ရူပါကို မိသားစု။ ဗိုလ်တထောင်။ ၁၀,၀၀၀
၃၅ ဦးဝင်းမြင့်+ဒေါ်သင်းသင်းရီ တို့အားရည်စူး၍ သား-မောင်ထွန်းလင်းကျော်၊ သမီး-မခိုင်ဖြိုးလှိုင်။ ၁၀,၀၀၀
၃၆ ဖခင် ဦးမောင်ခိုင်+ မိခင် ဒေါ်တင်သန်း၊ အစ်ကိုကြီး-ကိုဝင်းမြင့် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ချိုချိုခိုင် "ကျားမင်းပွဲရုံ"၊ ဘုရင့်နောင်။ ၂၀,၀၀၀
၃၇ မသူဇာမိုးမြင့်အောင်၊ အမှတ်-၃၆၊ သရက်မြိုင်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၅,၀၀၀
၃၈ ဦးမြင့်အောင်+ဒေါ်ခင်ခင်ဝေ၊ သမီး-နွယ်မွန်အောင်၊ ဆွေမွန်အောင် မိသားစု။ ၁၉၇၊ မေတ္တာလမ်း၊ ၁၄/၂ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ ၂,၀၀,၀၀၀
၃၉ ဦးဝင်းခိုင်+ဒေါ်ချိုချိုဝင်း မိသားစု။ စည်တိုင်ရွာ၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့၊ မကွေးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၄၀ ဒေါ်မြစန္ဒီ၊ မချိုချိုအောင်၊ ဒေါ်အေးနန္ဒာထွန်း ကောင်းမှု။ အမှတ်-၂၂၊(၆-လွှာ/A) ခတ္တာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄၁ အဖိုးအဖွား မိဘ ညီအစ်ကို မောင်နှမ ဆွေမျိုးများအားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ခင်နွယ်နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမ တစ်စုကောင်းမှု။ ၄/၁၆၊ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄၂ ဦးမြင့်ဆွေ+ဒေါ်အေးအေးသောင် မိသားစု။ တိုက်-၂၃၊ အခန်း(၁၀၄)၊ အောင်ဇေယျအိမ်ရာ၊ ကမ်းနားလမ်းအလယ်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်။ ၁၀,၀၀၀
၄၃ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း ကောင်းမှု။ ၉၅၊ ဗိုလ်တိုက်ချွန်းလမ်း၊ လှိုင်သာယာ။ ၁၀,၀၀၀
၄၄ ဒေါ်လှဝင်း မိသားစု။ လားရှိုးမြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄၅ ဖခင်-ဦးဘိုးအောင် အားရည်စူး၍ မိခင်-ဒေါ်အောင်ကြွဖြူ အားအမှူးထားပြီး သမီး-ဒေါ်ဝင်းမြသူ မိသားစု။ ၁၆၄-လမ်း၊ တာမွေ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄၆ ဒေါ်လှနွယ် မိသားစု။ လားရှိုးမြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄၇ ဦးအံ့ကျော်+ဒေါ်အေးအေးသိန်း၊ သမီး-မမီမီအောင်၊ သား-မောင်ကောင်းစည်သူ မိသားစု။ ၁၇/A၊ တိုက် B၊ အခန်း(၃၀၁)၊ န၀ဒေးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၄၈ ဖခင် ဦးခင်သိန်းနှင့် အစ်မ ဒေါ်နွယ်နွယ်သိန်း တို့အားရည်စူး၍ မိခင်-ဒေါ်တင်မြင့် ကို အမှူးထားပြီး သမီး-တင်တင်စိန်၊ ခိုင်ခိုင်၊ ဦးသန့်စင် မိသားစုကောင်းမှု။ ၁၃/၄၊ ခရေမြိုင်လမ်း၊ စုပေါင်း၊ သုဝဏ္ဏ။ ၅၀,၀၀၀
၄၉ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား ဦးထိပ်ထား၍ ဦးဌေးဝင်း+ဒေါ်ခင်ဝင်းနွယ် မိသားစု။ အမှတ်-၁၀၀၊ စိန်ပန်းပြာလမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏ။ ၅၀,၀၀၀
၅၀ မောင်အာကာထွန်း အားရည်စူး၍ မိခင်-ဒေါ်လှယဉ် ကောင်းမှု။ အမှတ်-၃၆၊ ၁၆၄-လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၅၁ ဒေါ်မြင့်ကြည် ကောင်းမှု။ အမှတ်-၁၂၅/၁၄/၃-ရပ်ကွက်၊ သံသုမာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၅၂ အစ်မ မစန်းစန်းနွယ်၊ တူ-ထွန်းထွန်းနိုင် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်၊ သမီး-သန္တာသိန်းထိုက်။ ၁၈/B၊ ကလပ်စစ်ကွန်ဒို၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၅၃ ဖခင် ဦးမောင်သိန်း+ မိခင် ဒေါ်သန်းညွန့် တို့အားရည်စူး၍ ဦးမင်းသိန်း+ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်၊ မောင်အောင်မင်းသော်+မသန္တာသိန်းထိုက် မိသားစု။ ၁၈/B၊ ကလပ်စစ်ကွန်ဒို၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၅၄ မောင်သူရဇော် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်၊ မောင်အောင်မင်းသော်+မသန္တာသိန်းထိုက် မိသားစု။ ၁၈/B၊ ကလပ်စစ်ကွန်ဒို၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၅၅ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးနှင့် သား-မျိုးမင်းဇော် တို့အားရည်စူး၍ မတင်တင်ခိုင် မိသားစု။ အမှတ်-၅၀၀/ ၂-လမ်း၊ ကော့ကရိတ်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၅၆ ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း ကောင်းမှု။ ၃၁၈/ F၊ ကန်သာယာ(၃)လမ်း၊ ကြည်စုရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံ။ ၁၀,၀၀၀
၅၇ ဖခင်ကြီး ဦးချစ်စိန်+မိခင်ကြီး ဒေါ်လှကြိုင် (မဟာစည်ယောဂီဟောင်း)အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စောဦး (အားထုတ်ဆဲယောဂီ) ကောင်းမှု။ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ မီးရထားရိပ်သာ၊ အင်းစိန်။ ၁၀,၀၀၀
၅၈ မိခင်-ဒေါ်တင်တင်၊ ခင်ပွန်း-ဦးညွန့်ရင် (၅)လပြည့်အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးအေးမြင့် (အားထုတ်ဆဲ ယောဂီ) ကောင်းမှု။ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ မီးရထားရိပ်သာ၊ အင်းစိန်။ ၂၀,၀၀၀
၅၉ ဒေါ်ရီရီဝင်း မိသားစု။ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၃၀,၀၀၀
၆၀ ကျေးဇူးရှင် မိဘ ဘိုးဘွား ဆရာသမားများ၊ ဆွေမျိုးအပေါင်းတို့အား ရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်မြင့်အောင် ကောင်းမှု။ အမှတ်-၁၉၅ (ပ-ထပ်)၊ ၃၄-လမ်း(အထက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၅၀,၀၀၀
၆၁ ဒေါ်ခင်အေးသန်း "၆၆"နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၁၀၈၊ မန္တလေးလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ ကန်တော်ကလေး။ ၅၀,၀၀၀
၆၂ ကိုအောင်ဝင်း ကောင်းမှု။ ၄၅၊ ထီးတန်းလမ်း၊ ဆေး/ငြိမ်း ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၅,၀၀၀
၆၃ ဦးတင်လှိုင်+ ဒေါ်သန်းသန်းမေ၊ သား-ငြိမ်းချမ်းအောင်၊ သမီး-ဖြိုးမွန်အောင် မိသားစု။ ၁၁၆/ လမ်းမတော်လမ်း၊ ပြည်မြို့။
၆၄ ကိုသက်နိုင်+မအေးအေးမြင့်၊ သား-မောင်စောလွင်ထူး မိသားစု။ ရေစက်ဝင်း၊ စည်ပင်၊ မြင်သာ(၁)လမ်း၊ ၁၄/၁-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၆၅ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်နွယ်နွယ်သိန်း ကောင်းမှု။ တိုက်(၁၃)၊ အခန်း(၄)၊ ခရေမြိုင်လမ်း၊ စုပေါင်းအိမ်ရာ၊ သုဝဏ္ဏ။ ၃,၀၀,၀၀၀
၆၆ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးလှအောင်(ငြိမ်း)+ဒေါ်သွယ်သွယ်သိန်း မိသားစု။ တိုက်(၃၅)၊ အခန်း(၁၀၂)၊ ကမာကြည်အိမ်ရာ၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၆၇ အိမ်မဲမဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် မိဘနှစ်ပါးတို့အားရည်စူး၍ အားထုတ်ဆဲယောဂီ ဒေါ်ခေမာသိင်္ဂီ၊ ဒေါ်ပပလှိုင် ကောင်းမှု။ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ အိမ်မဲမြို့။ ၅,၀၀၀
၆၈ မိခင်ကြီး ဒေါ်သန်းကြွယ်အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဥမ္မာအောင်၊ ဒေါ်သီရိအောင်၊ ဦးတေဇအောင် သားသမီးမြေးများ။ ၁၄၆/ N-2၊ ခေမာသီရိ၊ မရမ်းကုန်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၉ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ၊ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ မဟာစည်နာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သူရိယ "မွေးနေ့အလှူ"။ သာသနမာမကကျောင်း၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀,၀၀၀
၇၀ ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်ထွန်း(၆၀)နှစ် အားရည်စူး၍ ဇနီး-ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်နှင့် သားသမီးမြေး မိသားတစ်စု။ အမှတ်(၇၁)၊ ၃၈-ရပ်ကွက်၊ သီဟလမ်း၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁,၂၁,၅၀၀
၇၁ ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း၊ သား-သူရဇော်၊ သမီး-ရွှေသင်္ကြန်၊ ရွှေဟေမာန် မိသားစု။ အမှတ်-၁၁၆၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ပြည်မြို့။ ၃၀,၀၀၀
၇၂ အားထုတ်ဆဲယောဂီ ဒေါ်မြမြယု မိသားစု။ အမှတ်-၆၈၊ လှော်ကားလမ်းမ၊ ၇၀-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၅၀,၀၀၀
၇၃ ဦးမောင်ဟုတ်+ဒေါ်သန်းသန်းဌေး၊သားကြီး-ယုမောင်မောင်၊ သမီး-မေကြည်ကျော် မိသားစု။ အမှတ်(၂၉)၊ မင်းလမ်း၊ စာရေးကုန်း၊ မအူပင်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၇၄ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း မိသားစု။ ၅၂၀၊ သိင်္ဂီလမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၇၅ ဒေါ်ခင်ရီ မိသားစု။ (၁၅၃)၊ ရေစက်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေး၊ မရမ်းကုန်း။ ၅,၀၀,၀၀၀
၇၆ ဦးဟိန်းတင်+ဒေါ်သိန်းကြွယ် တို့အားရည်စူး၍ သမီး-ဒေါ်ကျင်ဟူးမြင့်။ မော်လမြိုင်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၇၇ ဦးဝင်းအောင်+ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း သားသမီးမိသားတစ်စု ကောင်းမှု။ ဖဒိုမြို့၊ ပဲခူးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၇၈ မိဘများကိုရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေ ကောင်းမှု။ အမှတ်(၅၈)၊ ၁၀-လမ်း၊ လမ်းမတော်။ ၁၀,၀၀၀
၇၉ မောင်အောင်ပိုင်+မချိုသန္တာအောင် ကောင်းမှု။ ၂၂/၆(က)၊ ခတ္တာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၈၀ ဒေါ်သန်းသန်း မိသားစု။ ၅၉၊ ၂၂-လမ်း၊ လသာ။ ၁၀,၀၀၀
၈၁ ကွယ်လွန်သူ မိဘများနှင့် ခင်ပွန်း ဦးအောင်သန်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်ငွေရင် မိသားစု။ ၂၄၇၊ ၁၇-ရပ်ကွက်၊ နှင်းဆီမြိုင်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၈၂ ဇနီး-ဒေါ်သောမာရွှေ အားရည်စူး၍ ခင်ပွန်း-ဗိုလ်မှူးမောင်လွင်(ရေ-ငြိမ်း) (အထွေထွေမန်နေဂျာ- ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး)၊သားကြီး-ဟိန်းထက်လွင်၊ သားငယ်-ဘုန်းမြင့်လွင် မိသားစု။ အခန်း(၂) ၃၂/၃၅၊ ၃၈-လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၈၃ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူးပြီး ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို အမှူးထား၍ ဒေါ်ခင်စိုးမြင့် ကောင်းမှု။ အမှတ်-၄၃၊ (၄-)လွှာ၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၈၄ ဦးမောင်မောင်မြင့်+ဒေါ်နီနီမြင့် မိသားစု။ တိုက်(၂၁၇)၊ အခန်း(၁၄)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ရန်ကင်း။ ၂၀,၀၀၀
၈၅ ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး-ဒေါ်စီ (၈)နှစ်မြောက်အားရည်စူး၍ ဦးရဝေထွန်း၊ သား-ကိုကျော်မျိုးဝေ၊ သမီး-မယဉ်မင်းသိမ့်၊ မြေး-ကိုထူးငယ်၊ မအိနြေ္ဒမျိုးဦး၊ မကြည်ဖြူမျိုးဦး မိသားစု။ အမှတ်-၆၇၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ တာမွေ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၈၆ ဆရာလေး ဒေါ်ပုည၀တီ ကောင်းမှု။ အမှတ်-၉၅၊ (၄-လွှာ)၊ စိတ္တသုခလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၈၇ ဖခင်ကြီး ဦးကျော်၏ (၉၉)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ။ ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူနှင့် မိသားစု။ ၄၀၃၊ တာဝါ (B)၊ မလိခကွန်ဒို၊ ရတနာလမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၅၀,၀၀၀
၈၈ ဦးခင်အောင် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ညွန့်ညွန့်သိန်း၊ သမီး-ရာဇာမိုး၊ လှိုင်လှိုင်မိုး မိသားစု။ ဆင်ဖြူကျွန်းကျေးရွာ၊ သရက်မြို့။ ၂၀,၀၀၀
၈၉ ဖခင်-ဦးမောင်ခိုင်+မိခင်-ဒေါ်တင်သန်း၊ အစ်ကိုကြီး-ကိုဝင်းမြင့် တို့အားရည်စူး၍ မချိုချို "ကျားမင်းပွဲရုံ"၊ ဘုရင့်နောင်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၁,၀၀၀
၉၀ ဦးသုခ+ဒေါ်ခင်အုန်း မိသားစု။ အမှတ်-၂၁/ G၊ သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၉၁ ဦးအောင်ဝင်း ကောင်းမှု။ အမှတ်-၄၅၊ ထီးတန်းလမ်းမ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၅,၀၀၀
၉၂ မိခင်-ဒေါ်အမာ အားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်တင်အေး ကောင်းမှု။ ၁၄/B၊ ဗမာအေးလမ်း၊ ၂/က-စံပြရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ၁၀,၀၀၀
ကျောင်းဆောင်အခန်း၊ဓမ္မာရုံ ၊ဆွမ်းစားဆောင် နှင့် အထွေထွေအလှူရှင်များ
၁ (ဦးတင်လှ) B.Com. B.L.R.A. FEDI (U.S.A)+ အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ၊ သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီ၊ လူမှုထူးချွန်ဒုတိယဆင့် ဒေါ်အေးအေးကြည် (ဒုဥက္ကဋ္ဌ-၁) (အမျိုးသမီးယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့) သားသမီးမြေးမိသားစု။ အမှတ်-၃၉/G၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ၉၀,၀၀,၀၀၀
၂ ဒေါက်တာသန်းဌေးမောင်+ဒေါက်တာလွင်လွင်ပြုံး၊ ဦးတင်စိန်+ဒေါ်လှလှနု ကောင်းမှု။ အမှတ်(၅)၊ သုခ၀တီလမ်း၊ စူနီယမ်ပါတ်၊ ရန်ကင်း။ (အခန်းဖြည့်စွက်ငွေအပြီး) ၁၂၀,၀၀,၀၀၀
၃ ကွယ်လွန်သူ အဖိုးအဖွားများနှင့် မိဘများအားရည်စူး၍ ဒေါ်သင်းသင်းရီ ကောင်းမှု။ ၇၁၇၊ ၂၄-လမ်း၊ ၁၃-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ (ဓမ္မာရုံအလှူ) ၃၀,၀၀၀
၄ ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင် "၆၃"နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၁၈/ B၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၅ ဒေါ်လှဝင်း မိသားစု။ လားရှိုးမြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၆ ဒေါ်လှနွယ် မိသားစု။ လားရှိုးမြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၇ ဦးအံ့ကျော်+ဒေါ်အေးအေးသိန်း၊ သမီး-မီမီအောင်၊ သား-ကောင်းစည်သူ မိသားစု။ ၁၇/A၊ တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ န၀ဒေးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၈ ဖခင် ဦးခင်သိန်းနှင့် အစ်မ ဒေါ်နွယ်နွယ်သိန်း တို့အားရည်စူး၍ မိခင်-ဒေါ်တင်မြင့် ကိုအမှူးထားပြီး သမီး-တင်တင်စိန်၊ ခိုင်ခိုင်၊ ဦးသန့်စင် မိသားစုကောင်းမှု။ ၁၃/၄၊ ခရေမြိုင်လမ်း၊ စုပေါင်း၊ သုဝဏ္ဏ။ ၅၀,၀၀၀
၉ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား ဦးထပ်ထား၍ ဦးဌေးဝင်း+ဒေါ်ခင်ဝင်းနွယ် မိသားစု။ အမှတ်-၁၀၀၊ စိန်ပန်းပြာလမ်း၊ (၃၀)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဏ။ ၃၀,၀၀၀
၁၀ ကိုအောင်ကိုဇော်+မအေးစန္ဒာမြိုင်၊ သား-မောင်ခန့်ဇော်၊ မောင်ခန့်သူ ၊ ရွှေနယားကုမ္ပဏီ မိသားစု။ ၂၅/F-4/A၊ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်။ (ရေကန်တွင်းဓမ္မာရုံအတွက်) ၂၀,၀၀,၀၀၀
၁၁ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဦးနန္ဒောဘာသ (သာသနာစာရ-၁၇) ကောင်းမှု။ ဆင်ပုန်းတောရကျောင်း၊ ဒေးစွန်ပါတောင်ခြေ၊ ပဲခူးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ဖခင် ဦးမောင်ကျော် (၂)လပြည့်နှင့် မိခင် ဒေါ်မြ (၂)နှစ်ပြည့်တို့အားရည်စူး၍ သမီး-ဒေါ်တင်တင်ထွေး၊ မြေး-ဉာဏ်လင်းထွန်း၊ မောင်ကောင်းမြတ် မိသားစု။ (၇၇/A)၊ သီရိ(၅)လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၃ ဦးမြစိန်+ဒေါ်ထားကြည် တို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ ၃၅/(ပ-ထပ်)၊ ဗဟန်း(၂)လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁၄ ဖခင်ကြီး ဦးချစ်စိန်+ မိခင်ကြီး ဒေါ်လှကြိုင် (မဟာစည်ယောဂီဟောင်း)အား ရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စောဦး (အားထုတ်ဆဲယောဂီ)ကောင်းမှု။ အမှတ်(၁၇)၊ ပေါ်တော်မူ(၁)လမ်း၊ မရမ်းကုန်း။ ၅၀,၀၀၀
၁၅ မိခင် ဒေါ်တင်တင်၊ ခင်ပွန်း- ဦးညွန့်ရင်၊ (၅)လပြည့်အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးအေးမြင့် (အားထုတ်ဆဲ ယောဂီ) အနောက်ကြို့ကုန်း၊ မီးရထားရိပ်သာ၊ အင်းစိန်။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ဒေါက်တာ ဒေါ်အေးအေးမြင့်၊ သား-မောင်အောင်အောင်၊ သမီး-မော်မော်သန့် မိသားစု။ တိုက်(၁၀)၊ အခန်း(၂၀၆)၊ အေးရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၂၀,၀၀၀
၁၇ ဖခင်ကြီး သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးပွင့်ကောင်း+မိခင်ကြီး အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ တို့အားရည်စူး၍ သား- ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း(ဥက္ကဋ္ဌ-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်)နှင့် သမီး- ဒေါ်ပွင့်မာခိုင် (ဘဏ္ဍာရေးမှူး-အမျိုးသမီးယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့) မိသားစုနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်-၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ (ရေကန်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုရန်) ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၀
၁၈ ဦးအောင်ဝင်း+ဒေါ်ကြွေကြွေဇင် မိသားစု (MA; LE TRADING CO.LTD) ကောင်းမှု။ အမှတ်-၂၁၂၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ (အခန်းလက်ကျန်ငွေ) ၄၀,၀၀,၀၀၀
၁၉ ကိုယုမောင်မောင် ကောင်းမှု။ အမှတ်(၂၉)၊ မင်းလမ်း၊ စာရေးကုန်း၊ မအူပင်မြို့။ (ဓမ္မာရုံ) ၁၀,၀၀၀
၂၀ မမေကြည်ကျော်ကျော် "မွေးနေ့အလှူ" ။ ၃၃၈/၃၃၉၊ ဆင်မင်းကွန်ဒို၊ (၆-လွှာ)၊ အလုံ။ (ဓမ္မာရုံ) ၁၀,၀၀၀
၂၁ ကိုအောင်ကိုဇော်+မအေးစန္ဒာမြိုင်၊ သား-မောင်ခန့်ဇော်၊ မောင်ခန့်သူ ကောင်းမှု။ ရွှေနယားကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ၂၅/F-4/A ၊ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်။ (ဓမ္မာရုံအလှူ) ၂၀,၀၀,၀၀၀
၂၂ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်စန်းရင် မိသားစု။ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ လှည်းတန်း ကမာရွတ်။ ၃,၀၀,၀၀၀
၂၃ နှစ်ဖက်သော မိဘများကိုအမှူးထား၍ ဦးကျော်မင်း+ဒေါ်စုစုရီ၊ သမီး-မခင်လပြည့်ဝန်း မိသားစု။ အမှတ်-၄၃၊ မြောင်းမြလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ (ဓမ္မာရုံအလှူ) ၃၀,၀၀၀
၂၄ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့် မိသားစု။ ရွှေဂုံသူအိမ်ရာ၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ (ဓမ္မာရုံအလှူ) ၂,၀၀,၀၀၀
၂၅ ဦးကိုကြီးနှင့် ဦးမင်းလှိုင် မိသားစု။ (ဓမ္မာရုံအလှူ) ၁၀,၀၀,၀၀၀
၂၆ မိဘများကိုရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေ ကောင်းမှု။ အမှတ်-၅၈၊ ၁၀-လမ်း၊ လမ်းမတော်။ ၁၀,၀၀၀
၂၇ ဖခင်ကြီး သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးပွင့်ကောင်း+မိခင်ကြီး အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ တို့အားရည်စူး၍ သား- ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း(ဥက္ကဋ္ဌ-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်)နှင့် သမီး- ဒေါ်ပွင့်မာခိုင် (ဘဏ္ဍာရေးမှူး-အမျိုးသမီးယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့) မိသားစုနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်-၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ (ရေကန်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုရန်) ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၀
၂၈ ဦးမောင်မောင်မြင့်+ဒေါ်နီနီမြင့် မိသားစု။ တိုက်-၂၁၇၊ အခန်း(၁၄)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၉ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ဦးထွန်းမြိုင်+ မိခင်ကြီး ဒေါ်လှကြည်နှင့် မောင်လေး-မောင်ဝင်းနိုင် တို့အားရည်စူး၍ ဦးသောင်းဒွေး၊ သမီး-ဒေါ်ကျင်ဝင်း၊ ဒေါ်သန်းဝင်း၊ ဒေါ်သန်းဌေး၊ သား-ဦးဌေးဦး၊ သမီး-ဒေါ်သီတာချို မိသားစု။ ၁၂၃၈၊ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။ (ရေကန်တွင်းယောဂီဆောင်အခန်းဖြည့်စွက်) ၁၀,၀၀,၀၀၀
၃၀ ဦးမင်းသိန်း+ဒေါ်စန်းစန်းမော်၊ သမီး-နှင်းဝတ်ရည် မိသားစု။ အမှတ်(၁၀၇)၊ ၁၉-ရပ်ကွက်၊ မြိတ်လမ်း၊ တောင်ဒဂုံ။ ၃၀,၀၀၀
မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ သိမ်တော်ကြီးပြုပြင်ရန် အလှူရှင်များ
စဉ် အလှူနေ့စွဲ အလှူရှင်အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ လှူဒါန်းငွေကျပ်
၁ မချယ်ရီ "၃၇" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၂ ဒေါ်ရင်ရင်အေးဖြူ၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၃ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဦးနန္ဒောဘာသ၊သာသနာစာရ(၁၇) ကောင်းမှု၊ ဆင်ပုန်းတောရကျောင်း၊ ဒေးစွန်ပါတောင်ခြေ၊ ပဲခူးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၄ နှစ်ဖက်သောမိဘများနှင့် ဦးချစ်မြိုင်အားရည်စူး၍ ဒေါ်စောလှ၊ ဦးလှကြိုင်+ဒေါ်လှမြင့် မိသားစု၊ တိုက်ကြီးမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၅ ဒေါ်တင်အေး မိသားစု၊ ၂၇၀/ ၃၉-လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၆ မသင်းသင်းမိုး ကောင်းမှု။ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၄)၊ ပင်ရွှေညောင်လမ်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၇ ကိုသက်နိုင်+မအေးအေးမြင့်၊ သား-စောလွင်ထူး၊ စည်ပင်ရေစက်ဝင်း၊ မြင်သာ(၁)လမ်း၊ ၁၄/၁၊ တောင်ဥက္ကလာ။ ၁၀,၀၀၀
၈ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်သန်းမြင့် မိသားစု။ ၁၂/၁-လမ်း၊ ပုသိမ်ညွန့်ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁၀,၀၀၀
၉ ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း ကောင်းမှု။ ၃၁၈/F ကန်သာယာ(၃)လမ်း၊ ဒေါပုံ။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ မော်ကျွန်းမဟာစည်ရိပ်သာခွဲ၊ ကန်ဦးသာသနာ့ရိပ်သာတွင် သီတင်းသုံးနေတော် မူသော ဦးအရိယဝံသ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စန်းယဉ် (အားထုတ်ဆဲယောဂီ) "ဒို့အင်အားစတိုးဆိုင်" မော်ကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ဦးအောင်ဇံဝင်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စန်းမြင့်၊သား-မောင်ရဲမြင့်ဇံ မိသားစု။ မြို့မရပ်၊ ပျော်ဘွယ်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ဒေါ်သန်းညွန့် ကောင်းမှု။ ၈၁၉/ (၂)ရပ်ကွက်၊ သုဇိတာ(၁၂)လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာ။ ၃၀,၀၀၀
၁၃ ဦးကျော်ခင်+ဒေါ်အုန်းဆင် တို့အားရည်စူး၍ အစ်ကို ကိုဝေလှ၊ ကိုသောင်းရွှေ၊ ဒေါ်သိန်းနွဲ့ မောင်နှမ တစ်စု၊ ကြုံလတာရွာ၊ ဝါးခယ်မမြို့။ ၁၅,၀၀၀
၁၄ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသော ဦးစိန်ဝင်း+ဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည်တို့အားရည်စူး၍ မထာမဝတီကောင်းမှု၊ ၁၈/(၂-လွှာ)၊ ရေတာရှည်လမ်းသစ်၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၅ ကွယ်လွန်သူများအားရည်စူး၍ ဒေါ်ယဉ်ရွှေ မိသားစု၊ တိုက်(၈၈)အခန်း-၁၀၂/ ၁၀-တောင် ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ စိုးသူရထွန်း ကောင်းမှု၊ မော်ကျွန်းမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ဦးတင်စိုး+ဒေါ်သန်းသန်း မိသားစု၊မော်ကျွန်းမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၈ ဦးမြမောင်+ဒေါ်အေးအေးနု မိသားစု၊ အောင်မင်္ဂလာရွှေဆိုင်၊ စစ်တွေမြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁၉ ကိုစံထွန်းလှ+မသန်းဌေး မိသားစု၊ စစ်တွေမြို့။ ၃၀,၀၀၀
၂၀ မောင်အာကာထွန်း အားရည်စူး၍ မိခင်-ဒေါ်လှယဉ်ကောင်းမှု။ အမှတ်-၃၆/၁၆၄ လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂၁ ဒေါ်သန်းတင်မြင့် အားရည်စူး၍ သမီး-မသူရိန်မိုး ကောင်းမှု။ လွစ္စလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂၂ ဒေါ်ဌေးမင် မိသားစု၊ ၁၃၄/B (၄-လွှာ) ၁၆-လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ ၅၀,၀၀၀
၂၃ ဦးအောင်သန်း+ဒေါ်ခင်ဝေ မိသားစု၊၇၅/လမ်း(၂၀)လသာ။ ၁၅,၀၀၀
၂၄ မချောယဉ် ကောင်းမှု၊ ၁၃၄/B (၄-လွှာ) ၁၆-လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂၅ နှစ်ဖက်သော မိဘများကိုရည်စူး၍ ဦးမင်းထွန်း+ဒေါ်ခင်စောဝေ မိသားစု။ ၄၉/ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၆ ဦးမြစိန်+ဒေါ်ထားကြည် တို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ သားသမီးများကောင်းမှု။ အမှတ်-၃၅/(ပ-ထပ်) ဗဟန်း(၂)လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၇ ဦးမြသန်း+ဒေါ်ကျင်မြ တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် ကောင်းမှု။ ဝါးခယ်မမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂၈ ဦးတင်လှိုင်+ဒေါ်သန်းသန်းမေ၊ သား-ငြိမ်းချမ်းအောင်၊သမီး-မဖြိုးမွန်အောင် မိသားစု။ ၁၀၆/ လမ်းမတော်လမ်း၊ ပြည်မြို့။ ၂၀,၀၀၀
၂၉ ကွယ်လွန်သူ ဦးမြင့်သိန်း ကောင်းမှု။ ၁၁၈/A ရေတာရှည်လမ်းဟောင်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၅၀,၀၀၀
၃၀ ဦးမောင်မောင်သိန်း "၅၈" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ။ ၁၀,၀၀၀
၃၁ ဦးမောင်မောင်မြင့်+ဒေါ်နီနီမြင့် မိသားစု။ တိုက်(၂၁၇)၊ အခန်း(၁၄)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၂ ဦးဇော်ဝင်း+ဒေါ်အေးသန်း မိသားစု။ ၃၁- ကျီတော်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁၀,၀၀၀
၃၃ နှစ်ဖက်သော မိဘများကိုရည်စူး၍ ဦးမင်းထွန်း+ဒေါ်ခင်စောဝေ မိသားစု။ အမှတ်-၄၉/ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၄ ကွယ်လွန်သူဖခင် -ဦးစိန်ကျော်အောင်+မိခင်ဒေါ်မြရင်၊ မောင်လေး- မောင်ဇော်မင်းအေး တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဘေဘီမိုး နှင့် မောင်နှမများ ကောင်းမှု။ ၅၉၃/ ယုဇန(၄)လမ်း၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၁ ဖြူးမိသားစု၊ ၅၈/(က)ရွှေတောင်ကြားလမ်း(၂)ရပ်ကွက်၊ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂ ကိုချိုသဲမောင်+မချိုသဲ၊ သား-အောင်ပိုင်ဖြိုးဦး မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်(၃၉)၊ ရေလယ်ဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃ (ဦးခင်မောင်ချန်)+ဒေါ်သန်းခင် တို့အား အမှူးထားရည်စူး၍ ဦးခင်မောင်မြင့်+ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်၊ သမီး-သဇင်ပြုံး မိသားစု၊ သန်လျင်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၄ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးစိန်ဝင်း+ဒေါ်ဝင်းဝင်းကြည် တို့အားရည်စူး၍ မထာမဝတီကောင်းမှု။ ၁၈/(၂-လွှာ) ရေတာရှည်လမ်းသစ်၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၅ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အစ်မ ဒေါ်မြလေး၊ ခင်ပွန်းဦးခင်မောင်ဝင်း၊ သား-ကိုညီညီ တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်ကြည်သိန်း နှင့် သားသမီးမြေးတစ်စု။ (၁၈)ငုဝါလမ်း၊ ပုလဲမြို့သစ်၊၂-ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ၃၀,၀၀၀
၆ ဒေါ်ခင်မြ အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု။ အမှတ်-၁၆၂၊ ၄၇-လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်။ ၁၀,၀၀၀
၇ ဖြူးမိသားစု၊ ၅၈/(က၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁ ၁-၈-၂၀၁၇ အဖိုးဦးဝမ်စိန်(ခ)ဦးအေးသန့်+အဖွားဒေါ်အုန်းကြင် တို့အားရည်စူး၍ ဦးစောရန်အောင်+ဒေါ်ရီရီပြုံး၊ သမီး-နေခြည်ရန်အောင် " " နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ၃,၃၂,၀၀၀
၂ ၂-၈-၂၀၁၇ မဟာစည်သံဃာတော်များမှလှူဒါန်းပါသည် ၃,၄၄,၀၀၀
၃ ၃-၈-၂၀၁၇ မဟာစည်သံဃာတော်များမှလှူဒါန်းပါသည် ၄,၄၂,၀၀၀
၄ ၄-၈-၂၀၁၇ ဦးသန်းထိုက် "မွေးနေ့" ဦးသန်းထိုက်+ဒေါ်မာမာဦး မိသားစု။ H-5 ရွှေသရဖီရိပ်မွန်၊ ရွှေအင်ကြင်းလမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၆,၄၅,၀၀၀
၅ ၅-၈-၂၀၁၇ မိခင်ကြီးဒေါ်ခင်နွဲ့ (၄)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု။ အမှတ်(၅)၊ မဟာဇေယျလမ်း၊ ရေကျော်။ ၄,၀၃,၀ဝ၀
၆ ၆-၈-၂၀၁၇ ဦးအောင်မြင့် "မွေးနေ့အလှူ" ဦးအောင်မြင့်+ဒေါ်ဌေးဌေးလွင်၊ သမီး-မအေးမြတ်မွန်၊ သား-မောင်စိုးမြတ်အောင် မိသားစု။ ကော့သောင်းမြို့။ ၃,၄၅,၀ဝ၀
၇ ၈-၈-၂၀၁၇ မဟာစည်သံဃာတော်များမှ လှူဒါန်းပါသည်။ ၃,၈၇,၀ဝ၀
၈ ၁၀-၈-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးမောင်မောင်(ခ)ဦးတင်ထွဋ်(၁၅)နှစ်ပြည့် အားရည်စူး၍ ဇနီး-ဒေါ်ခင်တီတီ၊ သမီးကြီး- မောင်သန်းနိုင်+မအလိမ္မာမောင်မောင်၊မြေး-ဥတ္တရမောင်၊ သား-မောင်ရန်လင်းမောင်+မစန္ဒီမောင်မောင်၊ မြေး-Henry, Harry, Holly ၊ သမီးငယ်-မောင်ကျော်ကိုကို+မသဲသဲဇလပ်ဖြူ၊ မြေး-ရှင်းရတီကျော် မိသားစု။ အမှတ်-၂၊ ခတ္တာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၂,၈၄,၀ဝ၀
၉ ၁၁-၈-၂၀၁၇ မဟာစည်သံဃာတော်များမှ လှူဒါန်းပါသည်။ ၃,၀၆,၀ဝ၀
၁၀ ၁၂-၈-၂၀၁၇ ဒေါ်လှမြသူ "၈၆" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၅၃/H-1 ၊ သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၃,၉၀,ဝ၀ဝ
၁၁ ၁၃-၈-၂၀၁၇ နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှူးထား၍ ဦးစန်းလွင်+ဒေါ်ထားထားရီ မိသားစု၊ ဦးထင်ကျော်ရှိန်+ ဒေါ်တင်ကြူကြူအေး မိသားစု၊ ကိုမျိုးသီဟ+မသိင်္ဂီ ၊ ပြည်မြို့။ ၄,၈၀,ဝ၀ဝ
၁၂ ၁၅-၈-၂၀၁၇ "သဒ္ဓါဆွမ်း" ဒေါ်ခင်ထွေး မိသားစု။ ၇၃/(၇)လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၃,၅၅,၀ဝ၀
၁၃ ၁၆-၈-၂၀၁၇ (ဦးမြင့်သိန်း+ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း) တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဒေါ်ခင်ခင်သန်း၊ ဒေါ်ရင်ရင်သန်း နှင့်သားသမီးတစ်စု ကောင်းမှု။ အမှတ်(၅၁)၊ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း၊ကန်/ရှေ့ ရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၃,၅၅,၀ဝ၀
၁၄ ၁၇-၈-၂၀၁၇ မဟာစည်သံဃာတော်များမှဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါသည်။ ၇,၀၂,၀ဝ၀
၁၅ ၁၈-၈-၂၀၁၇ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ရွှေထွန်း+ဒေါ်ဥမ္မာဝင်း၊ သား-မောင်ဆက်မြတ်ထွန်း(အားထုတ်ဆဲယောဂီ)၊ သမီး-မဖြူသီရိကျော် မိသားစု။ အမှတ်-၁၂၁/A ၊ အဏ္ဏဝါရိပ်သာ၊ အလုံ။ ၄,၅၄,၀ဝ၀
၁၆ ၁၉-၈-၂၀၁၇ Metro Wealth Holding (Thai) Co.,Ltd Wakiworld Partnership Limited, Dhammasi Teo Siao Wei+ Family, Teo Choo Giam + Family (No.171, Casa Legend Kaset Nawamin Raminera 14, Bangkok, Thailand) ၄,၉၂,၀ဝ၀
၁၇ ၂၀-၈-၂၀၁၇ ဒေါ်မြင့်မြင့် "၈၀" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၁၈၄၊ ၂၉-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၄,၇၄,၀ဝ၀
၁၈ ၂၁-၈-၂၀၁၇ ဦးစိုးစိုး+ဒေါ်သိင်္ဂီဝင်း၊ သား-မောင်ဇော်ဝင်းထွန်း၊ သမီး-စန္ဒီထွန်း မိသားစု။ အမှတ်(၃၀)၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ တာမွေ။ ၄,၆၃,၀ဝ၀
၁၉ ၂၂-၈-၂၀၁၇ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း(ဓမ္မသာလာ)၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း(ဆွမ်းကျောင်း)၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၂,၄၇,၀ဝ၀
၂၀ ၂၃-၈-၂၀၁၇ မိခင်ကြီးဒေါ်ချိုချိုအေး အမှူးထား၍ မခွန်းချိုစံ(ခ)ဂျူး ၏ "၂၄" နှစ်မြောက် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်(၁၄)၊ မင်္ဂလာသိဒ္ဓိလမ်း၊ ဆရာစံတောင်၊ ဗဟန်း။ ၃,၄၃,၀ဝ၀
၂၁ ၂၄-၈-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးဘသန်း အားရည်စူး၍ ဇနီး-ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း မိသားစု။ တောင်ကြီးမြို့။ ၄,၁၉,၀ဝ၀
၂၂ ၂၅-၈-၂၀၁၇ Kim Geum Cheol Rusala Jeung Chu Korea ၄,၃၈,၀ဝ၀
၂၃ ၂၆-၈-၂၀၁၇ Waki F+B Sdn Bhd Teo Siao Ec + Family, Teo Choo Guan+Family (No.1, Jalon Cheras Jaya 43200 Cheras Selongter, Malaysia) ၃,၅၈,၀ဝ၀
၂၄ ၂၇-၈-၂၀၁၇ "စိန်ကျော်မိုး" ဦးကျော်ငြိမ်း+ဒေါ်နုနုစိန် မိသားစု။ အမှတ်(၁၀၉) (မြေညီ)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၃,၇၀,ဝ၀ဝ
၂၅ ၂၈-၈-၂၀၁၇ (ဦးလှရွှေ+ဒေါ်ကွေ့ရင်) တို့အားရည်စူး၍ "နေပြည်တော်အပ်ချုပ်ဆိုင်" မိသားစု။ ၁၆၀၊ ၃၇-လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ၄,၁၅,၀ဝ၀
၂၆ ၂၉-၈-၂၀၁၇ ချောက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တစန္ဒာသီရိ သက်တော် "၅၀" နှစ်ပြည့်ရွှေရတု ဝိဇာတမွေးနေ့၊ ဦးဝင်းကြိုင်+ဒေါ်ကြည်ထွေး မိသားစု။ ၃,၆၁,၀ဝ၀
၂၇ ၃၀-၈-၂၀၁၇ ဘိုးဘွား မိဘဆွေမျိုးများအားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ခင်အေး " သဒ္ဓါဆွမ်း"။ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၂,၈၄,၀ဝ၀
၂၈ ၃၁-၈-၂၀၁၇ Gawk Miok Korea ၄,၅၀,ဝ၀ဝ
၂၉ ၁-၉-၂၀၁၇ မဖြူသက်မာ "မွေးနေ့အလှူ" သား- Franky "၁၀" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ နှင့် မသွန်းလဲ့အိမ် (ခ) Irene "၅" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၂၀/D ၊ နတ်မောက်ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၄,၇၀,ဝ၀ဝ
၃၀ ၂-၉-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီးဦးသိန်းရွှေ အားရည်စူး၍ မိခင်ကြီး-ဒေါ်နှင်းခိုင်၊ သမီး-ဒေါ်စိုးဦး သားသမီး မြေးတစ်စု။ အမှတ်-၃၉/(၃-လွှာ)၊ (၈)လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ ၃,၈၁,၀ဝ၀
၃၁ ၃-၉-၂၀၁၇ ဖျာပုံဦးမောင်မောင် အားရည်စူး၍ ဇနီး-ဒေါ်ခင်ပြုံးအေး မိသားစု။ အမှတ်-၉၂၊ ဗဟိုလမ်း၊ ၃/ခ-ရပ်ကွက်၊ ငွေကြာရံရိပ်သာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၄,၇၇,၀ဝ၀
၃၂ ၄-၉-၂၀၁၇ ဦးသိန်းထိုက်ဦး+ဒေါ်မျိုးမျိုးမင်း တို့၏သမီး-မဇေဇင်ဦး "၂၁" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ ၃,၃၀,ဝ၀ဝ
၃၃ ၅-၉-၂၀၁၇ ဒေါ်ငြိမ်းအေး "၇၉" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ S/289၊ ပြည်သာယာလမ်းသွယ်(၂)၊ ငွေတိုက်စိုးခြံ၊ ဇ/မြောက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၃,၃၂,၀ဝ၀
၃၄ ၆-၉-၂၀၁၇ ဦးကျော်ဇောမောင်+ဒေါ်အေးအေးခိုင် မိသားစု "သဒ္ဓါဆွမ်း" ။ အမှတ်(၄၁)၊ ရူပတောင်၊ စစ်တွေမြို့။ ၄,၀၅,၀ဝ၀
၃၅ ၇-၉-၂၀၁၇ ကိုလင်းထိုက်+ကေခိုင်ဦး မိသားစု။ အမှတ်-၄၁၀/ ဝေဇယန္တာအတွင်းလမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၄,၅၀,ဝ၀ဝ
၃၆ ၈-၉-၂၀၁၇ ကိုဟိန်လင်း+မနှင်းနွယ်နွယ်အောင်၊ သား-သော်ချမ်းလင်း ရက် "၁၀ဝ" ပြည့် ကင်ပွန်းတပ်အလှူ။ A.G (1)E CONDO ဈေးမြောက်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၄,၂၆,၀ဝ၀
၃၇ ၉-၉-၂၀၁၇ ဦးသန်းဝင်း+ဒေါက်တာခင်ချိုသန်း၊ သား-ကိုကျော်ဌေး၊ ကိုကျော်ဇင် တို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု။ ခြံအမှတ်-၂၁၊ ခတ္တာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၄,၄၃,၀ဝ၀
၃၈ ၁၀-၉-၂၀၁၇ ဦးအောင်အင်းလျုံ(ခ)ဦးထွန်းရ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ရှုလေ မိသားစု။ အမှတ်- ၁၇၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ဈေးကုန်းအနောက်၊ အင်းစိန်။ ၈,၆၅,၀ဝ၀
၃၉ ၁၁-၉-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးတင်ဆွေလှ နှင့် မိခင်ကြီးဒေါ်လှရီ (၃)နှစ်ပြည့် တို့အားရည်စူး၍ သမီး-မသိင်္ဂီ ကောင်းမှု။ ၃၄ - K ၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၅,၀၄,၀ဝ၀
၄၀ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ အဖိုးအဖွားနှင့် မိခင်ကြီးအားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ရီ မိသားစု။ အမှတ်-၁၅၃၊ ရေစက်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေး။ ၃,၃၂,၀ဝ၀
၄၁ ၁၃-၉-၂၀၁၇ Hiroki Katayama U. Vimala Japan ၃,၂၀,ဝ၀ဝ
၄၂ ၁၄-၉-၂၀၁၇ "သဒ္ဓါဆွမ်း" ဒေါ်မြမြ ဝိသာခါဆောင်။ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၂,၉၆,၀ဝ၀
၄၃ ၁၅-၉-၂၀၁၇ Bhikkhuni Jeong Seon+ Bhikkhuni Seon Joong (No.27, Kumsamro Kumjongku Busan Korea) ၄,၂၃,၀ဝ၀
၄၄ ၁၆-၉-၂၀၁၇ သား-ကောင်းမြတ်လင်း "၄" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၁၇၉ (၅-လွှာ-ဘီ)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံ။ ၄,၃၂,၀ဝ၀
၄၅ ၁၇-၉-၂၀၁၇ "၄၁" ကြိမ်မြောက် စိန်ကျော်မိုး "သဒ္ဓါဆွမ်းအလှူ" ဦးကျော်ငြိမ်း+ဒေါ်နုနုစိန် မိသားစု။ အမှတ်-၁၀၉/ (မြေညီ)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၃,၃၃,၀ဝ၀
၄၆ ၁၈-၉-၂၀၁၇ (ဖခင်-ဦးစန်းလှိုင်+မိခင်-ဒေါ်ထွေး) တို့အားရည်စူး၍ သား-ဦးကျော်ညွန့် မိသားစု။ ၁၀၄၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ ၃,၉၁,၀ဝ၀
၄၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ဦးကျော်သူဂါ+ဒေါ်ခင်မေမြင့်၊ သား-မောင်ရဲဝင့်သူ "မွေးနေ့အလှူ" ။ ၄၀၈/A ယုဇနကွန်ဒိုတာဝါ၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁,၇၀,ဝ၀ဝ
၄၈ ၂၀-၉-၂၀၁၇ ကိုသန်းနိုင် (၁)နှစ်ပြည့်အားရည်စူးအလှူ ၃,၆၃,၀ဝ၀
၄၉ ၂၁-၉-၂၀၁၇ ဗိုလ်ကြီးဝင်းလတ် "မွေးနေ့အလှူ"။ အမှတ်(၁၈)၊ ဟင်္သာတလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၄,၀၃,၀ဝ၀
၅၀ ၂၂-၉-၂၀၁၇ နာယကကြီး ဒေါ်ခင်ခင်ထား "မွေးနေ့အလှူ"။ ၁၂၁/၄၊ အရှေ့ရန်ကင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၂,၂၅,၀ဝ၀
၅၁ ၂၃-၉-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသော ဦးချစ်စိန်+ဒေါ်ခင်ညွန့် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဝင်းဝင်းရီ (အမှုဆောင်)၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်၊ ဒေါ်ခင်လေးရီ၊ ဒေါက်တာကျော်စိုးဝင်း၊ ဒေါက်တာတင်နှင်းသူ ၊ သားသမီး မြေးမြစ်တစ်စု ကောင်းမှု။ အမှတ်(၉)၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၄,၄၂,၀ဝ၀
၅၂ ၂၄-၉-၂၀၁၇ ဓာတ်ပုံ အေးဇော်မိုး(ကော့မှူး) "မွေးနေ့အလှူ"။ အမှတ်(၃)၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၃,၁၆,၀ဝ၀
၅၃ ၂၅-၉-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကြီး သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးပွင့်ကောင်း(၂၄)နှစ်ပြည့် အားရည်စူး အလှူ၊ သား-ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း(ဥက္ကဋ္ဌ-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်)၊ သား-ဦးမြင့်အောင်၊ သမီး-ဒေါ်ပွင့်မာခိုင်(ဒုဥက္ကဋ္ဌ(၂)-အမျိုးသမီး-ယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့)နှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်-၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၁,၂၆,၀ဝ၀
၅၄ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ဒေါက်တာဝင်းမြင့်+သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး၊ သား-မောင်ထွဋ်ခိုင်ဝင်း "မွေးနေ့အလှူ" အမှတ်-၅၆/၅၇၊ လှိုင်ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ "မြတ်မေတ္တာမွန်ကုမ္ပဏီ" ၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၄,၇၅,၀ဝ၀
၅၅ ၂၇-၉-၂၀၁၇ ဦးစံသိန်း "၉၁" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ။ အမှတ်(၉၀)၊ မကြီးကြီးလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၃,၉၅,၀ဝ၀
၅၆ ၂၈-၉-၂၀၁၇ (ဒေါ်မြတ်မြတ်နွယ်(ခ)ဒေါ်မြမြဝင်း) အားရည်စူး၍ ခင်ပွန်း ဦးသာထွန်း၊ သမီး-မစုမွန်ဝင်းထွန်း၊ သား-မောင်နိုင်ဇော်ထွဋ် မိသားစု။ တိုက်(၄၀)၊ အခန်း(၁၀၁)၊ စကားဝါလမ်း၊ ၅-ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၄,၁၄,၀ဝ၀
၅၇ ၂၉-၉-၂၀၁၇ ဆရာတော် ဦးသုနန္ဒ "မွေးနေ့အလှူ" သံသရာအေးကျောင်း၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၄,၁၄,၀ဝ၀
၅၈ ၃၀-၉-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးထွန်းအောင်+မိခင်ကြီး ဒေါ်တင်ညွန့် တို့အားရည်စူး၍ သားသမီးတစ်စု ကောင်းမှု။ ၃,၃၄,၀ဝ၀
၁ ၁-၈-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးအေးမောင်+ဒေါ်ကျင်ဥ တို့အားရည်စူး၍ သားသမီးများ ကောင်းမှု။ ၉၅၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း၊ လသာ။ ၁,၃၅,၂၀ဝဝ
၂ ၂-၈-၂၀၁၇ မဟာစည်သံဃာတော်များမှလှူဒါန်းပါသည် ၆,၈၅,၀ဝ၀
၃ ၃-၈-၂၀၁၇ မဟာစည်သံဃာတော်များမှလှူဒါန်းပါသည် ၆,၃၉,၀ဝ၀
၄ ၅-၈-၂၀၁၇ မိခင်ကြီးဒေါ်ခင်နွဲ့ (၄)နှစ်ပြည့် အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု။ အမှတ်(၅)၊ မဟာဇေယျလမ်း၊ ရေကျော်။ ၆,၉၆,၀ဝ၀
၅ ၆-၈-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး-ဒေါ်မြမြသန်း (၇)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ သားသမီးမြေး တစ်စု။ ၄၉/(ခ)၊ ပြည်သာယာလမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၈,၅၁,၀ဝ၀
၆ ၇-၈-၂၀၁၇ ဦးသိန်းဟန်+ဒေါ်အုန်းမြ တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဝဏ္ဏသိင်္ဂီ နှင့်တပည့်များ၊ ကျွန်းတောကျောင်းတိုက်၊ ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၇,၈၄,၀ဝ၀
၇ ၈-၈-၂၀၁၇ မဟာစည်သံဃာတော်များမှလှူဒါန်းပါသည် ၆,၁၀,ဝ၀ဝ
၈ ၁၀-၈-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးမောင်မောင်(ခ)ဦးတင်ထွဋ်(၁၅)နှစ်ပြည့် အားရည်စူး၍ ဇနီး-ဒေါ်ခင်တီတီ၊ သမီးကြီး- မောင်သန်းနိုင်+မအလိမ္မာမောင်မောင်၊ မြေး-ဥတ္တရမောင်၊ သား-မောင်ရန်လင်းမောင်+ မစန္ဒီမောင်မောင်၊ မြေး-Henry, Harry, Holly ၊ သမီးငယ်-မောင်ကျော်ကိုကို+မသဲသဲဇလပ်ဖြူ၊ မြေး-ရှင်းရတီကျော် မိသားစု။ ၂/ ခတ္တာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၂၅,၀၇,၀ဝ၀
၉ ၁၁-၈-၂၀၁၇ မဟာစည်သံဃာတော်များမှဆက်ကပ်ပါသည်။ ၆,၀၂,၀ဝ၀
၁၀ ၁၂-၈-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးလှထွန်း (၂၈)နှစ်ပြည့် အားရည်စူး၍ သား-ဦးလှဘော် မိသားစု။ တိုက်(၄)/ဝ၀၄၊ မြိုင်ဟေဝန်အိမ်ရာ၊ မရမ်းကုန်း။ ၈,၈၄,၀ဝ၀
၁၁ ၁၃-၈-၂၀၁၇ "ရဟန်းခံအလှူ" ဦးခင်မောင်ထွန်း+ဒေါ်မိုးကြည်ကို မိသားစု။ အမှတ်(၃)၊ မြဝတ်ရည်လမ်းသွယ်(၃)၊ မရမ်းကုန်း။ ၁၅,၀၇,၀ဝ၀
၁၂ ၁၄-၈-၂၀၁၇ ဆဋ္ဌသံဂီတိပုစ္ဆက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယ ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး စံလွန်တော်မူခြင်း (၃၅)နှစ်ပြည့် ရည်စူးအလှူ ၉,၄၈,၀ဝ၀
၁၃ ၁၅-၈-၂၀၁၇ ဖခင်ဦးထွန်းမြိုင်+မိခင်-ဒေါ်လှကြည် နှင့်မောင်လေး-မောင်ဝင်းနိုင် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကျင်ဝင်းနှင့် မောင်နှမများကောင်းမှု။ အမှတ်- ၁၂၃၈၊ တိုးချဲ့(၂)လမ်း၊ ၂/မြောက် ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။ ၅,၃၇,၀ဝ၀
၁၄ ၁၆-၈-၂၀၁၇ ဦးမြင့်သိန်း+ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဒေါ်ခင်ခင်သန်း၊ ဒေါ်ရင်ရင်သန်းနှင့် သားသမီးတစ်စု ကောင်းမှု။ အမှတ်(၅၁)၊ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း၊ ကန်/ရှေ့ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၇,၇၀,ဝ၀ဝ
၁၅ ၁၇-၈-၂၀၁၇ မဟာစည်သံဃာတော်များမှ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါသည်။ ၇,၀၂,၀ဝ၀
၁၆ ၁၈-၈-၂၀၁၇ Lee Yeonlin + Son Soon Hyang All Dhamma Families, Busan Korea ၇,၆၀,ဝ၀ဝ
၁၇ ၁၉-၈-၂၀၁၇ Metro Wealth Holding (Thai) Co.,Ltd Wakiworld Partnership Limited, Dhammasi Teo Siao Wei+ Family, Teo Choo Giam + Family (No.171, Casa Legend Kaset Nawamin Raminera 14, Bangkok, Thailand) ၁၁,၁၈,၀၀၀
၁၈ ၂၀-၈-၂၀၁၇ ကိုသူရအောင် "၃၅" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်(၇)၊ မိုးကောင်းလမ်း၊ ရန်ကင်း။ ၁၇,၂၉,၀ဝ၀
၁၉ ၂၁-၈-၂၀၁၇ နှစ်ဖက်သော မိဘများကိုအမှူးထား၍ ဒေါက်တာ မောင်မောင်သိမ်း+ ဒေါက်တာ မွန်မွန်တာ မိသားစု။ ခြံ(၁)၊ ပေါ်ဆန်းမွှေးလမ်း၊ သုဝဏ္ဏ။ ၇,၈၄,၀ဝ၀
၂၀ ၂၂-၈-၂၀၁၇ ဒေါ်ခင် "၉၀" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ။ အမှတ်-၁၂၇၊ ဗားကရာလမ်းမ၊ စမ်းချောင်း။ ၁၆,၂၄,၀ဝ၀
၂၁ ၂၄-၈-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးဘသန်း အားရည်စူး၍ ဇနီး-ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း မိသားစု။ တောင်ကြီးမြို့။ ၁၆,၆၂,၀ဝ၀
၂၂ ၂၅-၈-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးဝင်းမောင်+မိခင်ကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်၊ မောင်လေး-မျိုးဝင်းမောင် တို့အားရည်စူး၍ (ဗလ) မိသားစု။ အမှတ်-၇၈၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ တာမွေ။ ၉,၄၅,၀ဝ၀
၂၃ ၂၆-၈-၂၀၁၇ Waki F+B Sdn Bhd Teo Siao Ec + Family, Teo Choo Guan+Family (No.1, Jalon Cheras Jaya 43200 Cheras Selongter, Malaysia) ၆,၇၂,၀ဝ၀
၂၄ ၂၇-၈-၂၀၁၇ ဒေါက်တာသန့်ဇင်မင်း+ဒေါက်တာဇင်ဇင်ကျော်၊ သမီး-မြတ်ဆုမွန်သန့်၊ အိဖြူစင်သန့် "မွေးနေ့အလှူ" ။ အမှတ်-၁၅/၁/၂ ၊ နတ်စင်လမ်း၊ ဘိုကုန်း၊ အင်းစိန်။ ၇,၉၇,၀ဝ၀
၂၅ ၃၁-၈-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါး အားရည်စူး၍ ကိုနိုင်ဝင်း၊ ကိုညီစိုးမင်း ကောင်းမှု။ အမှတ်-A (ပ-ထပ်) သုဓမ္မာလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း။ ၆,၇၁,၀ဝ၀
၂၆ ၂-၉-၂၀၁၇ ဒေါက်တာပြည်စိုး+ဒေါ်ရင်မြင့် တို့အားရည်စူး၍ သားသမီး မြေးတစ်စု။ အမှတ်-၃၂၊ ကုက္ကိုင်းရေကူးကန် လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၅,၅၀,ဝ၀ဝ
၂၇ ၄-၉-၂၀၁၇ နှစ်ဖက်သောမိဘများ အားရည်စူး၍ ဦးကျော်မင်းထွန်း+ဒေါ်ရီရီခိုင် မိသားစု။ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ တင့်ဆန်းလမ်းသွယ်။ ၈,၃၂,၀ဝ၀
၂၈ ၅-၉-၂၀၁၇ အမျိုးသမီးယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ အမြဲနေဝေယျာဝစ္စများကောင်းမှု ၅,၃၃,၀ဝ၀
၂၉ ၆-၉-၂၀၁၄ ဘိုးဘိုးကြီး စည်သူဦးညီပုနှင့် နှစ်ဖက်သော မိဘ ဘိုးဘွားများရည်စူး၍ ဒေါက်တာစိုးပိုင် "၇၅" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ၊ ဒေါက်တာစိုးပိုင်+ဒေါက်တာနုနုထွေး ၊ သမီး-ဒေါက်တာစိုးသီတာ မိသားစု။ T-3 ရွှေအင်ကြင်းရိပ်မွန်၊ သုဝဏ္ဏ။ ၈၀,၄၀ဝ
၃၀ ၇-၉-၂၀၁၇ ဒေါ်သူဇာလွင် "မွေးနေ့အလှူ" အမှတ်-၈/၁၂၊ အခန်း(၃၀၃) ၊ (၂)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်။ ၈,၈၈,၀ဝ၀
၃၁ ၉-၁၀-၂၀၁၇ ကိုအောင်ကျော်သိန်း "၅၀"နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ။ အမှတ်-၁၇၆/(၃-လွှာ)၊ လမ်း(၄၀)အလယ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၆,၀၃,၀ဝ၀
၃၂ ၁၀-၉-၂၀၁၇ ဦးအောင်အင်းလျုံ(ခ) ဦးထွန်းရ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ရှုလေ မိသားစု။ ၁၇၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ဈေးကုန်းအနောက်၊ အင်းစိန်။ ၈,၆၅,၀ဝ၀
၃၃ ၁၂-၉-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ အဖိုးအဖွားနှင့် မိခင်ကြီးအားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ရီ မိသားစု။ အမှတ်-၁၅၃၊ ရေစက်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေး။ ၆,၃၄,၀ဝ၀
၃၄ ၁၃-၉-၂၀၁၇ Hiroki Katayama U.Vimala Japan ၁၀,၂၀,ဝ၀ဝ
၃၅ ၁၄-၉-၂၀၁၇ ဦးကြည်ညွန့် "မွေးနေ့အလှူ" ။ 121-B ၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၇,၅၅,၀ဝ၀
၃၆ ၁၅-၉-၂၀၁၇ ကိုဥက္ကာကျော်+မဆုပန်ထွာ တို့၏သား Lawrence Htwar Kyaw (Q)Roar Roar "၁" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ ၉,၄၂,၀ဝ၀
၃၇ ၁၆-၉-၂၀၁၇ ဦးစိန်မြင့်+ဒေါ်သိန်းမြင့်၊ သားကြီး-ငြိမ်းချမ်းအောင်+ခင်စန္ဒာမြင့်၊ မောင်ရဲမြင့်ခိုင်+မသဉ္ဇာလွင်၊ သမီးငယ်-သီရိမွန်၊ မြေး-Ruby မိသားစု။ အမှတ်(၄၀၃) ၂၆/၂-သုမင်္ဂလာအိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၇,၄၅,၀ဝ၀
၃၈ ၁၇-၉-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူဖခင် ဦးအော်ဖောင်း(၄၉)နှစ်မြောက်နှင့် မိခင်-ဒေါ်ကျင်မြိုင် (၁)နှစ်ပြည့် တို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု၊ အမှတ်(၁၈)၊ ၁၄-လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၂၁,၁၁,၀ဝ၀
၃၉ ၁၈-၉-၂၀၁၇ (ဖခင်-ဦးစန်းလှိုင်+မိခင်-ဒေါ်ထွေး) တို့အားရည်စူး၍ သား-ဦးကျော်ညွန့် မိသားစု။ ၁၀၄၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ ၅,၇၆,၀ဝ၀
၄၀ ၁၉-၉-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကြီး သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးပွင့်ကောင်း(၂၄)နှစ်ပြည့် အားရည်စူး အလှူ၊ သား-ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း(ဥက္ကဋ္ဌ-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်)၊ သား-ဦးမြင့်အောင်၊ သမီး-ဒေါ်ပွင့်မာခိုင်(ဒုဥက္ကဋ္ဌ(၂)-အမျိုးသမီး-ယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့)နှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်-၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၆,၂၀,ဝ၀ဝ
၄၁ ၂၁-၉-၂၀၁၇ ကိုဇော်လင်း+မအိအိဖြိုး၊ သမီး-မဆုသဒ္ဓါဖြူ "၁" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာ ။ အမှတ်-4-F/2 ၊ နှင်းချယ်ရီလမ်းသွယ်(၁) ၊နှင်းဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၅,၆၆,၀ဝ၀
၄၂ ၂၂-၉-၂၀၁၇ Ven.Khippa Pyanno Jetavana Vihara Washinton D.C,.U.S.A ၅,၇၂,၀ဝ၀
၄၃ ၂၃-၉-၂၀၁၇ ဖခင်ကြီး ဦးသန်းထွန်း(၂၈)နှစ်ပြည့်+မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်ဌေးမြင့်(၄)နှစ်ပြည့် တို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ သားသမီး၊ မြေးမြစ်များကောင်းမှု။ အမှတ်-(၂၇/ခ)၊ သစ္စာဝင်းအိမ်ရာ၊ သစ္စာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၄,၄၀,ဝ၀ဝ
၄၄ ၂၄-၉-၂၀၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဒေါက်တာစောတင်နှင့် မိခင်ကြီး ဒေါ်သီတာစိန် (၂)နှစ်ပြည့် ရည်စူးအလှူ ၊ ပင်လုံမိသားစု။ အမှတ်(၁၃၀)၊ ပင်လုံဂေဟာ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၂၂,၆၄,၀ဝ၀
၄၅ ၂၅-၉-၂၀၁၇ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကြီး သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးပွင့်ကောင်း(၂၄)နှစ်ပြည့် အားရည်စူး အလှူ၊ သား-ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း(ဥက္ကဋ္ဌ-ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ်)၊ သား-ဦးမြင့်အောင်၊ သမီး-ဒေါ်ပွင့်မာခိုင်(ဒုဥက္ကဋ္ဌ(၂)-အမျိုးသမီး-ယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့)နှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်-၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၄,၄၅,၀ဝ၀
၄၆ ၂၆-၉-၂၀၁၇ ဒေါက်တာဝင်းမြင့်+သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး၊ သား-မောင်ထွဋ်ခိုင်ဝင်း "မွေးနေ့အလှူ" ။ အမှတ်-၅၆/၅၇၊ လှိုင်ရတနာမွန်အိမ်ရာ၊ "မြတ်မေတ္တာမွန်ကုမ္ပဏီ"၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၅,၄၄,၀ဝ၀
၄၇ ၂၈-၉-၂၀၁၇ Myojuk Korea Bhikkhuni Daegu Korea ၉,၂၀,ဝ၀ဝ
၄၈ ၃၀-၉-၂၀၁၇ ဦးသိုက်ဟိန်း+ဒေါ်ကေခိုင်ကျော် တို့၏ သား-မောင်ခန့်ဆွေဟိန်း "၃" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့၊ သမီး-မရတီဖူးပွင့် "အမည်ပေးကင်ပွန်းတပ်မင်္ဂလာ" ။ အမှတ်(၃၀၃/က)၊ ဗသိက(၁၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၂,၆၃,၀ဝ၀
မဟာစည်တရားတော်ပြန့်ပွားရေး ထာဝရငွေပဒေသာပင် အလှူရှင်များ
၁ မိခင်နှင့် အစ်ကို တို့အားရည်စူး၍ ဦးလှကျော်နှင့် မိသားစု။ အမှတ်(၂)၊ သီရိဝေဘာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂ ဒေါ်သက်သက်ရွှေ (၂-၈-၂၀၁၇) "မွေးနေ့" ကောင်းမှု။ ၉၉/F သံလွင်လမ်း၊ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃ မောင်လင်းအေးထက်အောင် ကောင်းမှု။ ၈/၃၂၄၊ နီလာ(၃)လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာ။ ၁၀,၀၀၀
၄ ဒေါ်မြမြ ဝိသာခါအဆောင်မှူး၊မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၅ ကိုစံထွန်းလှ+မသန်းဌေး မိသားစု၊စစ်တွေမြို့။ ၂၀,၀၀၀
၆ ဒေါ်ခင်ဝင်း(ပါမောက္ခ-ငြိမ်း) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး၊ အမျိုးသမီးယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၇ ဦးသိုက်ထွန်း+ဒေါ်ခင်စန်းမူ၊ သမီး-မအေးချမ်းပိုင်ပိုင်မိသားစု။ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၈ မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်ကြူနှင့် ကိုယဉ်ထွေး+မမြင့်ဝင်း မိသားစု။ ဝဲကျွန်းရပ်၊ ထားဝယ်။ ၁၁,၀၀၀
၉ မောင်အာကာထွန်း အားရည်စူး၍ မိခင်-ဒေါ်လှယဉ် ကောင်းမှု ။ အမှတ်-၃၆၊ ၁၆၄-လမ်း၊ တာမွေ။ ၅၀,၀၀၀
၁၀ ဦးစန်းရှု+ဒေါ်တင်တင်နွဲ့ မိသားစု။ အိမ်အမှတ်-၁၈၊ နဝဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ ၆၅-ပိတောက်လမ်း၊ လှိုင်သာယာ။ ၂၀,၀၀၀
၁၁ ဦးကျော်စိုးမိုး+ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း၊သမီး-သရဖီဦး ၊သား-ဇေရဲမာန် "ဆွေသဟာဆန်စက်" မိသားစု။ နတ်မော်ရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့။ ၅,၀၀၀
၁၂ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း+ဒေါ်ဝေဝေလွင်၊သမီး-ဇာခြည်ဝန်း မိသားစု။ ဘုရားကြီး(၄)လမ်း၊ ဟင်္သာတမြို့။ ၅,၀၀၀
၁၃ အန်တီ-ဒေါ်ဝင်းကြည် "၈၇" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၉၉/F သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၄ ဒေါ်ရီရီချို ကောင်းမှု။ ၁၄၆၊ ဖောင်တော်ဦးဘုရားလမ်း၊ ကျောက်ရေတွင်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁၅ ကွယ်လွန်သူ မိဘဘိုးဘွားများနှင့် ဦးရဲဋ္ဌေးတို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်မေညွန့်၊ ဒေါ်ခင်ဆွေသွင် ကောင်းမှု။ အမှတ်(၅)၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ဒေါ်ခေမာနန္ဒီ၊မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ဗဟန်း၊ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ကျေးဇူးရှင် အဘ-ဦးစိန်လှိုင်+အမိ ဒေါ်လှရွှေ တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်၊ မောင်အောင်မင်းသော်၊ သန္တာသိန်းထိုက် မိသားစု။ ၁၈/B- Classic Condo ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၈ မလေးလေးမြင့် ကောင်းမှု။ ဥက္ကံမြို့၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၉ ဦးစိန်မောင်+ဒေါ်ကြည်အေး သမီး-မနီလာစိုး မိသားစု ကောင်းမှု။ ရေပေါ်ကန်ကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂၀ မောင်ကျော်ထင်ဟိန်း၊ မောင်ကျော်ကျော်လင်း၊ မခိုင်ဇင်ဦး၊ မဆုမြတ် မောင်နှမတစ်စု ကောင်းမှု။ ၃၆၃၊ စ-ရပ်ကွက်၊ သုဓမ္မာလမ်းမကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာ။ ၁၀,၀၀၀
၂၁ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း မိသားစု။ ၁၂၅/(၉)လမ်း၊ ကန်တော်ကလေး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁၀,၀၀၀
၂၂ ကိုဟိန်းလင်း+မနှင်းနွယ်နွယ်အောင်၊ သား-မောင်သော်ချမ်းလင်း မိသားစု။ AG(I)E CONDO ဈေးမြောက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၃ ဦးမြစိန်+ဒေါ်ထားကြည် တို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ ၃၅/(ပ-ထပ်)၊ ဗဟန်း(၂)လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၂၄ ဒေါ်ခင်ရွှေလင်း မိသားစု ကောင်းမှု။ ရေဦးမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၅ ဒေါ်လှဝင်း မိသားစု ကောင်းမှု။ လားရှိုးမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂၆ ဒေါ်လှနွယ် မိသားစု ကောင်းမှု။ လားရှိုးမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၂၇ ဒေါ်ခင်မြင့်အောင် မိသားစု ကောင်းမှု။ ၁၉၅/(ပ-ထပ်) ၃၄-လမ်း ၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂၈ နန်းသရဖီကြွယ်၊ နန်းဟန်နီကြွယ် မိသားစု ကောင်းမှု။ တမူးမြို့။ ၅၀,၀၀၀
၂၉ အဘိုးအဘွား၊ မိခင် ဒေါ်ကျင်နိုင်နှင့် အစ်ကို ကိုကျော်မိုးနိုင် တို့အားရည်စူး၍ ဦးလှကျော် မိသားစု ကောင်းမှု။ အမှတ်(၂)၊ သီရိဝေဘာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၀ ဒေါ်ပန်းအိမိုး မိသားစု ကောင်းမှု။ ရန်ကုန်မြို့။ ၂၀,၀၀၀
၃၁ ဦးအောင်သန်းမြင့်+ဒေါ်အေးအေးတင့် မိသားစု။ ၂-လမ်း၊ လက်ပံတန်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၂ ဒေါ်ခင်စိုးဦး မိသားစု ကောင်းမှု။ ၄-လမ်း၊လက်ပံတန်းမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၃၃ ဦးမောင်ကြီး+ဒေါ်အေးတင် တို့အားရည်စူး၍ အောင်ဘရားသား မိသားစု ကောင်းမှု။ မုံရွာမြို့။ ၅,၀၀,၀၀၀
၃၄ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ၊ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ မဟာစည်နာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသူရိယ ၏မွေးနေ့အလှူ မာမကကျောင်း၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၃၅ ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ ၄၂/ မင်္ဂလာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၆ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း မိသားစု ကောင်းမှု။ ၅၂၀၊ သိင်္ဂီလမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာ။ ၁၀,၀၀၀
၃၇ ဖခင်ကြီး ဦးညွန့်တင် အားရည်စူး၍ သမီးများ ကောင်းမှု။ C/148 သန္တာ(၁၂)လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁၅,၀၀၀
၃၈ ဦးပါ+ဒေါ်မြ မိသားစု၊ ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊တောင်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၃၉ ဦးသန်း ကိုရည်စူး၍ ဒေါ်မြဝင်း မိသားစု ကောင်းမှု။ နတ်မောက်(၅)လမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာ။ ၁၀,၀၀၀
၄၀ ဒေါ်သန်းကြိုင်၊ ဒေါ်ခင်သိန်းဦး "မွေးနေ့အလှူ" ။ ၂၈၊ သိန္ဒီလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁၀,၀၀၀
၄၁ ဦးတင်မောင်လေး+ဒေါ်ဝင်းမာ မိသားစု ကောင်းမှု။ တိုက်/A အခန်း(၆၀၃)၊ ပညာဝတီအိမ်ရာ၊ ရန်ကင်း။ ၃၀,၀၀၀
၄၂ ဦးမောင်မောင်မြင့်+ဒေါ်နီနီမြင့် မိသားစု ကောင်းမှု။ တိုက်(၂၁၇)၊ အခန်း(၁၄)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၄၃ ဒေါ်စန်းစန်းနွယ် ကောင်းမှု။ အမှတ်(၇၀၄)/(၅-လွှာ) A ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၄၄ ဦးမြင့်စိုး+ဒေါ်တင်ဝင်း၊ ဦးဇော်ဝင်းထွန်း+ဒေါ်ဝင်းမာ တို့အားအမှူးထား၍ မဝိမလဉာဏီ၊ ဓမ္မလင်္ကာရ သီလရှင်ကျောင်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးသားပြုစုတော်မူခဲ့သော
ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာနိဿယကျမ်းကြီး(ပ+ဒု+တ+စ) ၄-အုပ်တွဲ အလှူရှင်များ
စဉ် အလှူနေ့စွဲ အလှူရှင်အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ အစုံရေတွက် လှူဒါန်းငွေကျပ်
၁ ဦးဝင်းအောင်+ဒေါ်အေးအေးဆင့်၊ သား-မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း မိသားစု။ က/၅၄၈၊ သဇင်လမ်း၊ ၅၄-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂ ဦးနေဝင်း+ဒေါ်ရီ၊ သမီး-နေရည်ငြိမ်း မိသားစု။ အမှတ်- ၇၆/ ၁၂၁-လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃ မိဘနှစ်ပါး အားရည်စူး၍ ဦးရန်နိုင်စိုး+ဒေါ်ကေသီဦး၊ သား-ဝေယံထွဋ်ခေါင် မိသားစု။ သရက်တောမင်းကြီးလမ်း၊ အင်းစိန်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄ ဦးအောင်ဝင်း"၇၁" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့၊ ဦးအောင်ဝင်း+ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်၊ သမီး-မစန်းသီတာဝင်း၊ မငြိမ်းငြိမ်းထွေး "နတ်ပြည်မွှေးလဘက်ခြောက်" မိသားစု။ အမှတ်-၁၄/ ဇဝနတိက္ခလမ်း၊ ဆရာစံတောင်/အနောက်၊ ဗဟန်း။ ၂- စုံ ၂၀,၀၀၀
၅ ဒေါ်သက်သက်ဆွေ (၂-၈-၂၀၁၇)မွေးနေ့အလှူ။ ၉၉/F သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၆ လင်းလင်းယု ကောင်းမှု။ ၁၂/ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဖျာပုံမြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၇ ဒေါ်ရွှေသန်း သမီးများနှင့် မောင်လင်းပြည့်သောင်း မိသားစု။ ၄၃/(၇)လမ်း၊ လမ်းမတော်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၅- စုံ ၅၀,၀၀၀
၈ မိခင်ကြီး ဒေါ်ကြည်ခင်၊ သား-ဦးသိန်းသန်းစိုး မိသားစု။ ၆၁/၁၂- လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၃- စုံ ၃၀,၀၀၀
၉ ဦးငွေခိုင်+ဒေါ်သီတာဦး မိသားစု။ B ဆောင်/(၃-လွှာ) ညောင်ပင်လေးပလာဇာ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၂- စုံ ၂၀,၀၀၀
၁၀ မော်ကျွန်းမဟာစည်ရိပ်သာခွဲ၊ ကန်ဦးသာသနာ့ရိပ်သာတွင် သီတင်းသုံးတော်မူသော ဦးအရိယာဝံသအားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စန်းယဉ် (အားထုတ်ဆဲယောဂီ) "ဒို့အင်အားစတိုးဆိုင်" မော်ကျွန်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ဦးထွန်းစိန်+ဒေါ်မြင့်မြင့်အုန်း မိသားစု။ အမှတ်-၅၈၅/ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၀- စုံ ၁,၀၀,၀၀၀
၁၂ ဒေါ်မြမြခိုင် "၇၀" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ မ/၅၅- တောင်သူကုန်းလမ်း၊ အင်းစိန်။ ၃- စုံ ၃၀,၀၀၀
၁၃ ကွယ်လွန်သူများ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ယဉ်ရွှေ ကောင်းမှု။ တိုက်-၈၈/အခန်း/၁၀၂-(၁၀) တောင်ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၄ ကျေးဇူးရှင်မိဘများကို အမှူးထား၍ မစုစုလွင် ကောင်းမှု။ ၁၁၇၊ လှိုင်မြစ်လမ်း၊ အလယ်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်။ ၅- စုံ ၅၀,၀၀၀
၁၅ ဖခင်ကြီး ဦးချစ်စရာ၊ မိခင်ကြီးဒေါ်မြို့ နှင့် အစ်မ-ဒေါ်မြလေးနှင့် တော်စပ်ခဲ့ဖူးသော ဆွေမျိုးတို့ အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်ကြည်သိန်း "၈၁" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ ၁၈/ငုဝါလမ်း၊ ပုလဲမြို့သစ် (၂)ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ၅- စုံ ၅၀,၀၀၀
၁၆ ဒေါ်နွဲ့ရီ၊ မထွေးညို ကောင်းမှု။ အမှတ်-၁၃၂/ (၄-လွှာ) ၁၈-လမ်း၊ လသာမြို့နယ်။ ၅- စုံ ၅၀,၀၀၀
၁၇ မောင်အောင်သူရကျော် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့် နှင့် တပည့်ယောဂီများကောင်းမှု။ အမှတ်-၄၃/ (၄-လွှာ)၊ (၇)လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၃- စုံ ၃၀,၀၀၀
၁၈ ဦးလှဝင်း+ဒေါ်ခင်စု မိသားစု။ အမှတ်-၁၈၄၀/ ၇၁-ရပ်ကွက်၊ တ/ဒဂုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁၉ ကွယ်လွန်သူ ကျေးဇူးရှင် မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးစိန် (ဥက္ကဋ္ဌ-မဟာစည်ပဋိပတ္တိ သာသနာ နုဂ္ဂဟအဖွဲ့)+ဒေါ်သန်း တို့အားရည်စူး၍ သားဖြစ်သူ ဦးသိန်းဇော်၊ နတ်တလင်းမြို့၊ ကောင်းမှု။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၀ ကွယ်လွန်သူ ခင်ပွန်း ဦးတင်ဝင်းအားရည်စူး၍ ဇနီး-ဒေါ်ခင်ညွန့်နှင့် မိသားစု။ ၃၆၄/ နေကြာ လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၁ ဦးကျော်စိုး+ဒေါ်ဝင်းမြင့် မိသားစု။ အခန်း(၁)၊ လိုင်းအမှတ်(၃၀၈၃)၊ တပနယ် (ခ) လိုင်းတိုက် (၉)လုံး၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၂ ဒေါ်ပညာသိင်္ဂီ ကောင်းမှု။ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၃၀၂)၊ ညောင်တန်းအိမ်ရာ၊ ပုဇွန်တောင်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၃ ဒေါ်ရှုဟုန် အားရည်စူး၍ ဦးကျော်လှ မိသားစု။ ၃၆/(ပ-ထပ်)၊ (၇)လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၄ ဦးမျိုးဝင်း+ဒေါ်ခိုင်မိသားစု. ၉၉/F ၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၅ ဦးမျိုးသန့်ေ ကာင်းမှု။ ၉၉/F ၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၆ မောင်ကံဆန်း ကောင်းမှု။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၇ အန်တီဒေါ်ဝင်းကြည် "၈၇" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ ၉၉/F ၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၈ ဒေါ်ထက်ထက်လင်း ကောင်းမှု။ အမှတ်(၂၂)၊ ကမ္ဘောဇလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၂၉ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးသိန်းရွှေ အားရည်စူး၍ မိခင်ကြီးနှင့်သားသမီး မြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ ၃၉/(၃-လွှာ)၊ (၉)လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၀ မခင်ကျော့ဝေ "မွေးနေ့အလှူ" ။ ၃၆/ ရတနာပုံလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၁ ဦးထွန်းစိန်+ဒေါ်မြင့်မြင့်အုန်း မိသားစု။ ၅၈၅/ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၂- စုံ ၂၀,၀၀၀
၃၂ ဖခင်ကြီး ဦးချစ်စိန်+မိခင်ကြီး ဒေါ်လှကြိုင် (မဟာစည်ယောဂီဟောင်း) အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စောဦး (အားထုတ်ဆဲယောဂီ) ကောင်းမှု။ အမှတ်(၁၇)၊ ပေါ်တော်မူ(၁)လမ်း၊ မရမ်းကုန်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၃ မေမေ-(ဒေါ်တင်တင်) ခင်ပွန်း-(ဦးညွန့်ရင်) (၅)လပြည့်အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးအေးမြင့် (အားထုတ်ဆဲယောဂီ) ကောင်းမှု။ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ မီးရထားရိပ်သာ၊ အင်းစိန်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၄ ဦးကျော်စိုးမိုး+ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း၊ သမီး-သရဖီဦး၊ သား-မောင်ရွှေတိုး မိသားစု။ နတ်မော်ရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၅ ဦးစိုးသန်း+ဒေါ်ဝင်းသန်း မြေးများ မိသားစု ကောင်းမှု။ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၆ နှစ်ဖက်သောမိဘများ အားရည်စူး၍ ဦးစိန်မြင့်+ဒေါ်တင်ရွှေ မိသားစု။ ပြာကတက်ရွာ၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၇ ဦးခင်ဦး+ဒေါ်ခင်ရီ မိသားစု ကောင်းမှု။ ၆၄၉/ မြရတနာ(၃)လမ်း၊ ၂၄-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၈ မမိုးပွင့်ဖြူ ကောင်းမှု။ ခေတ္တ-ဂျပန်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၃၉ ဦးတင်ဝင်း+ဒေါ်တင်အုန်းမြင့်၊ သမီး-မမိုးပွင့်ဖြူ မိသားစု။ ၂၂၃/ ၃၈-လမ်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၀ ဦးလှသောင်း+ဒေါ်စန်း မိသားစု။ ဆန်အိပ်ကျေးရွာ၊ ဝါးခယ်မမြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၁ မိဘဆရာသမားများ အားအမှူးထား၍ မပညာစာရီ ကောင်းမှု။ သုံးဆယ်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၂ ကိုကျော်ဖြိုးဦး+မဇင်မာဝင်း၊ သား-သော်ဇင်ထူး မိသားစု ။ မကြီးကြီးလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၃ ဦးမောင်စိန်+ဒေါ်ရင်ရွှေ သားသမီးမြေး မိသားစုကောင်းမှု။ ၁၇၁/၁၈၀ ၊ အခန်း(၆)၊ ၂၆-လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၄ မနန္ဒာဦး၊ မသဒ္ဓါသက်ထက်စံ ကောင်းမှု။ ရုံးဒေါင့်၊ ကျိုက်လတ်မြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၅ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ ဒေါ်ပုသန်းနှင့် မိသားတစ်စု ကောင်းမှု။ ကွမ်းခြံရွာ၊ နတ္တလင်းမြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၆ မိခင်ကြီး ဒေါ်သန်းကြွယ် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဥမ္မာအောင်၊ ဒေါ်သီရိအောင်၊ ဦးတေဇအောင် သားသမီးမြေးများ ကောင်းမှု။ ၁၄၆/N-2 ၊ ခေမာသီရိ၊ မရမ်းကုန်း။ ၁- စုံ ၁၀၀၀၀
၄၇ ဒေါ်ရတနာဝတီ ကောင်းမှု။ သမိုင်း(၂)လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၈ ကွယ်လွန်သူမိခင်-ဒေါ်မြယုံ အားရည်စူး၍ သား-ဦးစစ်တင် မိသားစု ကောင်းမှု။ အမှတ်-၁၁၁၊ အောင်သိဒ္ဓိကျောင်းလမ်း၊ မရမ်းကုန်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၄၉ မချယ်ရီ၊ တိုက်-၄၁/G-2 ၊ မဟာမြိုင်အိမ်ရာ၊ ၄၁-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၀ ဒေါက်တာဝင်းအောင်+ဒေါ်လှမြသွယ် မိသားစု။ အမှတ်-၁၂/A-4၊ ၁၄၉-လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၁ မသူဇာမိုးမြင့်အောင် ကောင်းမှု။ အမှတ်(၃၆)၊ သရက်မြိုင်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၂ ဦးအောင်မင်း ကောင်းမှု။ M.M.R.D. Co., Ltd ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၃ ဒေါ်မြမြယု (အားထုတ်ဆဲယောဂီ) ကောင်းမှု။ ၆၈/ လှော်ကားလမ်းမ၊ (၇၀) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၄ ဖခင် ဦးကိုကိုကြီး+မိခင်ဒေါ်ကျင်မွေး တို့အားရည်စူး၍ သမီး- မခင်မကြီး၊ မခင်မလေး၊ အမွှာညီအစ်မ ကောင်းမှု။ အမှတ်(၂၆)၊ စိန်မေတ္တာလမ်း၊ ဟာမစ်တစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၅ ဦးမောင်မောင်မြင့်+ဒေါ်နီနီမြင့် မိသားစု။ တိုက်(၂၁၇)၊ အခန်း(၁၄)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ရန်ကင်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၆ မိခင်ကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် အားအမှူးထား၍ ဦးစောမော်ထွန်း+ဒေါ်အေးအေးမင်း မိသားစု။ ပဲခူးမြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၇ မောင်မင်းဟိန်းထိုက် မိသားစု၊ Teacher ရူပါ ကောင်းမှု။ အမှတ်-၆/(က)၊ မြောင်းမြလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၂- စုံ ၂၀,၀၀၀
၅၈ ဒေါ်ယဉ်မြ (အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာမကြီး)နှင့် မမီးငယ် မိသားစု။ လပွတ္တာမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၅၉ ဖခင် ဦးမောင်ခိုင်+ မိခင် ဒေါ်တင်သန်း၊ အစ်ကိုကြီး-ကိုဝင်းမြင့် တို့အားရည်စူး၍ မချိုချိုခိုင် "ကျားမင်းပွဲရုံ" ဘုရင့်နောင်။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၆၀ ဖခင် ဦးမောင်ခိုင်+မိခင် ဒေါ်တင်သန်း၊ အစ်ကိုကြီး-ကိုဝင်းမြင့် တို့အားရည်စူး၍ ဦးဝင်းတင်အောင်၊ သား-မောင်သု မိသားစု။ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁- စုံ ၁၀,၀၀၀
၁ နှစ်ဖက်သော မိဘများအားအမှူးထား၍ ကိုဇော်မင်းဦး+မခိုင်သဉ္ဇာလှိုင် မိသားစု ကောင်းမှု။ ၁၄၀/ အောင်မေတ္တာ (၂)လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂ (ဦးပွင့်ကောင်း+ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ) သား-ဒေါက်တာဦးတင့်စိုးလင်း ၊ သမီး-ဒေါ်ပွင့်မာခိုင် မိသားစုနှင့် ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်-(၁၁၉) သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၅၀,၀၀၀
၃ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဒေါက်တာဦးတင့်စိုးလင်း နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်-(၁၁၉) သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄ ဒေါ်ခင်မာလွင် "မွေးနေ့အလှူ" ။ အမှတ်-၃၇/ ၁၆၄-လမ်း၊ တာမွေ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၃,၀၀,၀၀၀
၅ ဦးဝင်းအောင်+ဒေါ်အေးအေးဆင့်၊ သား-မောင်ဉာဏ်လင်းထွန်း မိသားစု။ က/၅၄၈၊ သဇင်လမ်း၊ ၅၄-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၆ အနန္တကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သော ဦးတိုး+ဒေါ်အုံးအုံး တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်နန်းစိန်ဌေး ကောင်းမှု။ ဓမ္မဂဝေသီအဆောင်၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၇ ဒေါ်ရင်ရင်အေးဖြူ ကောင်းမှု။ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၈ ဦးသန်းဇော်+ဒေါ်နွဲ့သီတာခိုင်၊ သား-မောင်ဘုန်းလက်ျာဇော် "၁"နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ ၂၈၃/(၆-လွှာ)၊ လမ်း(၄၀) ၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၉ ဦးတင်မြင့်+ဒေါ်ခင်စန်းရွှေ မိသားစု။ တိုက်-၁၉၄၊ အခန်း(၄၀၂)၊ ကွမ်းခြံ(၂)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၀ ဦးသောင်းကြည် ကောင်းမှု။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဟိုပင်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၁ ကွယ်လွန်သူ အဘိုးအဘွားများရည်စူး၍ မမိုးပွင့်ဖြူ ကောင်းမှု။ ခေတ္တ-ဂျပန်။ ၁၀,၀၀၀
၁၂ ဒေါ်သက်သက်ဆွေ (၂-၈-၂၀၁၇) မွေးနေ့အလှူ။ ၉၉-F သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၃ မသင်းသင်းမိုး မိသားစု။ တိုက်(၃)၊ အခန်း(၄)၊ ပင်ရွှေညောင်လမ်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၁၄ ဦးလှမြင့်+ဒေါ်အမာကြည် သားသမီးမြေးတစ်စု။ တိုက်-၂၅/အခန်း(၂၆)၊ လှိုင်မြင့်မိုရ်အိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၁၅ ဒေါ်တင်တင်ဦး "မွေးနေ့" အလှူ။ အမှတ်(၁၃၉)ဇေယျာသိဒ္ဓိလမ်း၊ (၃၁)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၁၆ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်နု "၆၈" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူ ။ ၆၀၁/ ဆရာစံလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာ(၁)၊ သန်လျင်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၁၇ ကွယ်လွန်သူ ဦးဟန်စိန်၊သား-မောင်မျိုးမင်းဦး တို့အားရည်စူး၍ "စိန်နဂါးဆေးဆိုင်" မိသားစု၊ ကျောက်တန်း။ ၁၀,၀၀၀
၁၈ (ဦးမောင်ချစ်)+ဒေါ်သန်းခင် တို့အားရည်စူးအမှူးထား၍ ဦးခင်မောင်မြင့်+ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း၊ သမီး-မသဇင်ပြုံး မိသားစု ကောင်းမှု။ သန်လျင်။ ၁၀,၀၀၀
၁၉ ကိုကျော်ဖြိုးဦး+မဇင်မာဝင်းချို၊ မောင်သော်ဇင်ထူး မိသားစု ကောင်းမှု။ မကြီးကြီးလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၀ ဒေါ်သန်းညွန့် ကောင်းမှု။ ၈၁၉၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သုဇိတာ(၁၂)လမ်း ၊မြောက်ဥက္ကလာ။ ၁၀,၀၀၀
၂၁ ဒေါ်တင်ရီ၊ "၆၀" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အလှူ။ ၂၇/အောင်ဇေယျ(၅)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်၊ သုဝဏ္ဏ။ ၁၀,၀၀၀
၂၂ ဒေါ်ခင်မာတင် ကောင်းမှု။ တိုက်(၂၀)၊ အခန်း(ဝ၁)၊ ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာ(၂)၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၃ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်-ဦးသာညွန့် နှင့် အစ်ကို ကိုဇော်လင်းတို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စိန် နှင့် မိသားစု ကောင်းမှု။ တိုက်(၂)၊ အခန်း(၁)၊ နံ့သာကုန်းမီးရထားရိပ်သာ၊ အင်းစိန်။ ၁၀,၀၀၀
၂၄ ဒေါ်လှမြသူ "မွေးနေ့" အလှူ။ အမှတ်/53-H သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၅ နှစ်ဖက်သော မိဘများအမှူးထား၍ ဦးစန်အောင်+ဒေါ်ဥမ္မာမြင့် သမီး- မအိအိစိုး၊ သားမက်-မောင်မျိုးမြင့်အောင် မိသားစု။ ဝေဘာဂီမြို့သစ်၊ မြောက်ဥက္ကလာ။ ၁၀,၀၀၀
၂၆ ဦးဝင်းမြင့်၊ သမီး-မကြူကြူမာ ၊မြေး-မခင်ငြိမ်းစံ မိသားစု။ ညောင်လေးပင်၊ ပဲခူးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၇ မိခင်-ဒေါ်တင်သန်း အားအမှူးထား၍ သား-ကိုဇော်လင်းနိုင်၊ သမီး-မပုဏ္ဏမီ မောင်နှမကောင်းမှု၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၂၈ ဦးအုန်းကြိုင် "၈၀" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ အမှတ်-၂၀/၃၂၃၊ သုခမိန်လမ်းသွယ်၊ ရွှေပေါက္ကံ။ ၁၀,၀၀၀
၂၉ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အစ်မဒေါ်မြလေး၊ခင်ပွန်း ဦးခင်မောင်ဝင်း၊သား.-ကိုညီညီ တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည်ကြည်သိန်းနှင့် သားသမီးမြေးတစ်စု ကောင်းမှု။ ၁၈/ငုဝါလမ်း၊ ပုလဲမြို့သစ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ၃၀,၀၀၀
၃၀ မိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ကြည်သိန်းအားအမှူးထား၍ ဦးအောင်နိုင်+နော်သန်းဇင်အောင် မိသားစု။ ၆၅၁/ ဗိုလ်မဉာဏလမ်း၊ ၃၁-ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံ။ ၁,၀၀,၀၀၀
၃၁ မိခင်-ဒေါ်အေးအေးသန်း "၅၆" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့၊ သမီး-မမြတ်ဆုစန္ဒာလွင် ကောင်းမှု။ ၃၇/ ရှမ်းရိပ်သာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၃၂ ကိုအောင်မြတ်+မသီတာ၊ သမီး-အိမြတ်နိုး၊ သိမ့်မြတ်နိုး မိသားစု။ ၁၅/ တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၃၃ ဦးမျိုးဝင်း(ကနေဒါ) မိသားစု ကောင်းမှု။ ကနေဒါနိုင်ငံ။ ၁၀,၀၀၀
၃၄ ဒေါ်မြတ်မြတ်စိုး "မွေးနေ့" ကောင်းမှု။ Tosta Plaza ၄၀၃/ သုမင်္ဂလာအိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၃၀,၀၀၀
၃၅ ဖခင်-ဦးဝင်းတင်+မိခင်-ဒေါ်ခင်ညွန့် တို့အားရည်စူး၍ သမီး-မကြည်ကြည် "၅၅" နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ။ ၅၃/ နတ်မောက်လမ်းသွယ်(၁) ဗဟန်း။ ၅၀,၀၀၀
၃၆ ဒေါ်ခင်ဝင်း(ပါမောက္ခ-ငြိမ်း)တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (အမျိုးသမီး-ယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့) မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်။ ၁၀,၀၀၀
၃၇ ဦးအံ့ကျော်+ဒေါ်အေးအေးသိန်း၊သမီး-မီမီအောင်၊သား-ကောင်းစည်သူ မိသားစု။ ၁၇/A တိုက်(၄)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ နဝဒေးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၃၈ ဦးစန်းရှု+ဒေါ်တင်တင်နွဲ့ မိသားစု၊ အိမ်အမှတ်-၁၈/၆၅ ပိတောက်၊ နဝဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၃၉ အန်တီဒေါ်ဝင်းကြည် "၈၇" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အလှူ။ ၉၉/F ၊ သံလွင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၄၀ ကိုဇေယျာလတ်+မနွယ်နီအောင် မိသားစု ကောင်းမှု။ ၁၁၂၀/ မြတ်လေးလမ်း၊ ၄၁/ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၂၀,၀၀၀
၄၁ ဒေါ်ဝိဟာရီ ကောင်းမှု။ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၄၂ ကိုစန်းမြင့်+မခင်စောဟန် မိသားစု ကောင်းမှု။ အမှတ်-(ခ/န-၅၈) ရူပမြောက်၊ စစ်တွေမြို့။ ၅၀,၀၀၀
၄၃ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား ရည်စူး၍ ဦးမင်းထွန်း+ဒေါ်ခင်စောဝေ မိသားစု။ အမှတ်(၄၉)၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၄၄ ဖခင်ဦးမောင်ကျော်(၂)လပြည့်နှင့် မိခင်ဒေါ်မြ (၂)နှစ်ပြည့် တို့အားရည်စူး၍ သမီး-ဒေါ်တင်တင်ထွေး၊ မြေး-ဉာဏ်လင်းထွန်း၊ မောင်ကောင်းမြတ် မိသားစု။ (၇၇/A )၊ သီရိ(၅)လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၄၅ ဦးစိန်သောင်း+ဒေါ်ကြည်အေး၊ သား-မောင်သန့်ဇော်မင်း မိသားစု။ ရေပေါ်ကန်ရွာ၊ သုံးခွမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၄၆ ဒေါက်တာသန့်ဇင်မင်း+ဒေါက်တာဇင်ဇင်ကျော် မိသားစု။ အမှတ်-၁၅/ခ-၂/၊ နတ်စင်လမ်း၊ ဘိုကုန်း၊ အင်းစိန်။ ၅၀,၀၀၀
၄၇ ဦးခင်မြင့်+ဒေါ်နိုင်နိုင်မော်၊ သမီး-မမြင့်မြင့်မော် မိသားစု။ ရေပေါ်ကန်ကျေးရွာ၊ သုံးခွမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၄၈ နှစ်ဖက်သော မိဘများအားအမှူးထား၍ ကိုဟိန်းလင်း+မနှင်းနွယ်နွယ်အောင်၊ သား-မောင်သော်ချမ်းလင်း မိသားစု။ AG(I)E CONDO ဈေးမြောက်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၄၉ ဒေါ်မြင့်မြင့်မေ (ညောင်ကန်အေးယောဂီ) ကောင်းမှု။ အင်းစိန်မြို့နယ်။ ၅,၀၀၀
၅၀ (သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရဦးပွင့်ကောင်း)+အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ၊ သား-ဒေါက်တာ ဦးတင့်စိုးလင်း၊ သမီး-ဒေါ်ပွင့်မာခိုင် မိသားစုနှင့် ရွှေပုစွန် မိသားစုများ။ ၁၁၉၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၅၀,၀၀၀
၅၁ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း နှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ မိသားစုများနှင့် ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်-(၁၁၉) ၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၅၂ ဒေါ်တင်အေး ကောင်းမှု။ ၆၉/ခ၊ ပါရမီရိပ်သာလမ်း၊ ကေတုမာလာရိပ်သာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၅၃ ဒေါ်တင်သန်း ကောင်းမှု၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၅၄ ဒေါ်စန်းလှိုင် မိသားစု ကောင်းမှု။ ၁၀၈/ မန္တလေးလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၅,၀၀၀
၅၅ အဘိုးအဘွား၊ မိခင်ဒေါ်ကျင်နိုင်နှင့် အစ်ကို ကိုကျော်မိုးနိုင်တို့အားရည်စူး၍ ဦးလှကျော် မိသားစု။ အမှတ်(၂)၊ သီရိဝေဘာလမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၅၆ ဦးမျိုးညွန့်+ဒေါ်ချစ်ချစ်နိုင်၊ သား-ဇွဲနိုင်အောင် မိသားစု။ ၇၉/ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၅၇ ဦးရဲအောင်+ဒေါ်အေးအေးနိုင်၊ သား-ကောင်းတေဇာနိုင် မိသားစု။ အမှတ်-၆၊ သီရိဇေယျာလမ်း၊ ပြည်သာယာ၊ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၅၈ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးနှင့် ဦးကိုကိုလွင်၊ မောင်အာကာထွန်း တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်လှရင် မိသားစု။ ၃၆/၁၆၄-လမ်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၅၉ ကွယ်လွန်သူ ဦးလှမြင့် အားရည်စူး၍ ဒေါ်သန်းအေး၊ သား-ဟိန်းအောင်ဖြိုး မိသားစု။ ၂၅/(ခ)၊ ဥယျာဉ်လမ်း၊ ဆာဘိုးသာခြံ၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၀ ကွယ်လွန်သူအဖ ဦးမောင်ဟန်+အမိ ဒေါ်မြရီ တို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ ဒေါ်ဥတ္တရစာရီ၊ သား-ဦးစိန်ကျော်၊ မင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၁ ကွယ်လွန်သူ အဖိုး-ဦးမြဟန်+အဖွားဒေါ်သိန်းမြ တို့အားရည်စူး၍ မြေး-ဒေါ်ရီရီမြင့် နှင့်သားသမီးများ၊ တိုက်(၂၁)၊ အခန်း(၃၂)၊ ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာ၊ (၂)ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၂ ဦးအောင်ကျော်သိန်း+ဒေါ်ခင်ရီ မိသားစု၊ သာကေတ။ ၁၀,၀၀၀
၆၃ ကွယ်လွန်သူ အစ်မ-ဒေါ်ယဉ်ယဉ်စန်း (၁၀)နှစ်ပြည့် အားရည်စူး၍ ဒေါက်တာဒေါ်ယဉ်ယဉ်ချို မိသားစု၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၆၄ မိခင်ဒေါ်သန်းကြွယ်အားရည်စူး၍ ဒေါ်ဥမ္မာအောင်၊ ဒေါ်သီရိအောင်၊ မောင်-ဦးတေဇအောင် သားသမီး မြေးများကောင်းမှု။ ၁၄/N-2 ၊ ခေမာသီရိလမ်း၊ မရမ်းကုန်း။ ၁,၀၀,၀၀၀
၆၅ ကိုစည်သူရဲမြင့်+မသိမ်းဇံဖြူ၊ သမီး-ဇွန်မိုးစက်ရဲမြင့်၊ အဉ္ဇလီရဲမြင့် မိသားစု။ F-42၊ ရွှေစပယ်(၃)လမ်း၊ FMI CITY ၁၀,၀၀၀
၆၆ ပဲခူးဆရာတော် အားအမှူးထား၍ ဒေါ်ခင်နု ကောင်းမှု။ သုဓမ္မစာရီဆောင်၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း။ ၂၀,၀၀၀
၆၇ နာယကဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ၊ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ ဘဒ္ဒန္တသူရိယ "မွေးနေ့" အလှူ။ မာမကကျောင်း၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၆၈ ဦးသတိုးမြင့်မောင်မောင်+ဒေါ်အိနန္ဒာစိန်ဝင်း မိသားစု။ (၆၆)၊ ယုဇနလမ်း၊ ၄၁-ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ။ ၂၀,၀၀၀
၆၉ မသက်သက်အောင်(ခ)မဖြူ "၅၂" နှစ်ပြည့်မွေးနေ့။ ၁၀၂/ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
၇၀ ကွယ်လွန်သူ ဦးမြင့်သိန်း ကောင်းမှု၊ ၁၁၈/A၊ ရေတာရှည်လမ်းဟောင်း၊ ဗဟန်း။ ၂၀,၀၀၀
၇၁ သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီ မိခင်ကြီး ဒေါ်အမာကြည် (စန္ဒာမြိုင်ကျောင်း) အားအမှူးထား၍ ဦးသန့်ဇင်ကျော်+ ဒေါ်နန်းနန်းဌေး၊ သား-မောင်မိုးသန့်ကိုကို(ခ)ဘုံဘုံ "၂၅" နှစ်မြောက် မွေးနေ့ (အမေရိကန်နိုင်ငံ)။ ၁၀,၀၀,၀၀၀
၇၂ ဒေါ်ခင်ရီ မိသားစု။ ၁၅၃/ရေစက်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေး၊ မရမ်းကုန်း။ ၃၀,၀၀၀
၇၃ ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း ကောင်းမှု။ ၃၁၈/F ကန်သာယာ(၃)လမ်း ၊ဒေါပုံ။ ၅,၀၀၀
၇၄ ဦးအောင်ကျော်ဇော မိသားစု၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ ၁၀,၀၀၀
၇၅ မောင်လွင်ဝေယံအောင် "မွေးနေ့" ။ ၄၅/ ကန်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၁၀,၀၀၀
၇၆ ဦးအောင်တင်+ဒေါ်နုနုလွင်။ ၄၅၊ ကန်လမ်း၊ ကမာရွတ်။ ၁၀,၀၀၀
၇၇ ကိုဝင်းလှိုင်မြင့် ကောင်းမှု။ ၆၁/ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၇၈ ဦးအောင်မိုး+ဒေါ်သန်းသန်းအေး မိသားစု။ ၆၁/ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ တာမွေ။ ၁၀,၀၀၀
၇၉ ဦးသန်းဝင်း+ဒေါ်ယဉ်ယဉ်စိုး၊ သမီး-မနှင်းအိဝါ၊ မကြည်ရှင်းခန့် မိသားစု။ ၂၄/ အဝေရာလမ်း၊ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၈၀ မသူဇာမိုးမြင့်အောင် ကောင်းမှု။ အမှတ်(၃၆)၊ သရက်မြိုင်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၈၁ ဦးဝင်းအောင်+ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း သားသမီးများ ကောင်းမှု။ ဖဒိုမြို့၊ ပဲခူးတိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၈၂ ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်ကြည် အားရည်စူး၍ ကိုသန်းဇော်ဦး+မပုလဲ မိသားစု။ ခြောက်ထပ်ကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၈၃ ဒေါ်ခမ်းပန်း၊ ဒေါ်လွေစောရင် ကောင်းမှု။ နန်းခမ်းမြို့၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း။ ၁၀,၀၀၀
၈၄ ဦးထွန်းဝေ+ဒေါ်စိန်တင်မိသားစု။ အမှတ်-၁၅/B ၊ ပျားရည်ကုန်းလမ်း၊ တာမွေ။ ၅၀,၀၀၀
၈၅ ဦးကြီးမြင့် ကောင်းမှု။ လှည်းတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၈၆ ဦးပြား+ဒေါ်ကျင်နု မိသားစုကောင်းမှု။ ၁,၀၀,၀၀၀
၈၇ ဒေါ်ခင်ဝင်းမြတ် ကောင်းမှု။ တိုက်(၁၀)၊ အခန်း(၅၀၄)၊ မြနန္ဒာအိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၈၈ ကိုဇော်ဝင်းလွင်+မစန္ဒီထွန်း၊ သမီးကြီး သွန်းသစ္စာ၊သမီးငယ်-မြတ်နိုးသစ္စာ မိသားစု။ ၁၆-၅ လမ်း၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာ။ ၁၀,၀၀၀
၈၉ ဦးဖြူညွန့်+ဒေါ်မာမာကြူ၊ သား-ထက်အောင်လွင် မိသားစု၊ သန်လျင်မြို့။ ၁၀,၀၀၀
၉၀ ဒေါ်စိန်စိန် သားသမီးမြေးတစ်စုကောင်းမှု။ တိုက်(၂၇၀)၊ အခန်း(၆)၊ ၂-ရပ်ကွက်၊ ရန်အောင်လမ်းသွယ်(၆)၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၉၁ ဦးကြည်လွင်+ဒေါ်ကြည်မြိုင်၊ သမီး- မဌေးဌေးကြည်၊ မဌေးဌေးဝင်း မိသားစု။ တောင်ဥက္ကလာပ။ ၁၀,၀၀၀
၉၂ ဦးအောင်သိန်းမြင့်+ဒေါ်အေးအေးတင့် မိသားစု။ အမှတ်(၂၀)၊ ၂-လမ်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ လက်ပံတန်းမြို့။ ၁၀,၀၀၀
၉၃ နှစ်ဖက်သောမိဘများကို ရည်စူး၍ ဦးမင်းထွန်း+ဒေါ်ခင်စောဝေ မိသားစု။ ၄၉/ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာ၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၉၄ ဦးကျော် အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူ ကောင်းမှု။ အမှတ်-၄၀၃/တာဝါ/ဘီ၊ မလိခကွန်ဒို၊ ရတနာလမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၉၅ ဦးမင်းသိန်း+ဒေါ်စန်းစန်းမော်၊ သမီး-နှင်းဝတ်ရည် မိသားစု။ အမှတ်(၁၀၇)၊ မြိတ်လမ်း၊ ၁၉-ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၉၆ (ဦးပွင့်ကောင်း+ဒေါ်ခင်နွဲ့ရီ) သား-ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်း ၊ သမီး-ဒေါ်ပွင့်မာခိုင် မိသားစုများနှင့် ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်-(၁၁၉) ၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၅၀,၀၀၀
၉၇ ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဒေါက်တာတင့်စိုးလင်းနှင့် ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများ၊ ရွှေပုစွန်မိသားစုများ။ အမှတ်-(၁၁၉) ၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁,၀၀,၀၀၀
၁ ကိုဇော်မင်းဦး+မခိုင်တင်ဇာလှိုင် မိသားစု။ ၁၀၄/အောင်မေတ္တာ(၂)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၂ ကိုဟိန်းလင်း+မနှင်းနွယ်နွယ်အောင်၊ သား-မောင်သော်ချမ်းလင်း မိသားစု ။ AG(I)E CONDO ဈေးမြောက်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်။ ၁,၀၀,၀၀၀
၃ ကွယ်လွန်သူ ဦးကျော်မင်းအားရည်စူး၍ ဒေါ်လှမြင့် မိသားစု ကောင်းမှု။ တောင်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၄ ဦးကျော်ဝင်း+ဒေါ်လှမြင့် ၊ သမီး-မစန်းစန်းဌေး မိသားစု ကောင်းမှု။ တောင်ဒဂုံ။ ၁၅,၀၀၀
၅ မောင်ငြိမ်းချမ်းအေး+မြခင်စန္ဒာမြင့် ကောင်းမှု။ ရန်ကုန်မြို့။ ၃၀,၀၀၀
၆ ဦးမောင်မောင်မြင့်+ဒေါ်နီနီမြင့် မိသားစု။ တိုက်(၂၁၇)၊ အခန်း(၁၄)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၁ ဖခင် ဦးထွန်းလှိုင်+မိခင် ဒေါ်အေးမြိုင် တို့အားရည်စူး၍ ဒေါ်တင်ရီနှင့် မောင်နှမတစ်စု ကောင်းမှု။ တိုက်(၆)၊ နေသူရိန်လမ်း၊ ဆရာစံတောင်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ (၁၅ မျိုးအလှူ) ၅၀,၀၀၀
၂ ဦးအောင်မြို့ မိသားစု ကောင်းမှု။ ၂၀/၁-စကားဖြူလမ်း ၊ ၁၄/၃-မြင်သာ၊ တောင်ဥက္ကလာပ။ (၁၅ မျိုးအလှူ) ၅၀,၀၀၀
၃ ဦးရန်သိမ်း+ဒေါ်မေဝင်းခိုင်၊ သား-ချိုးတချိုင်း၊ ချိုးတပေါင်း မိသားစု။ အမှတ်(၁၁၈)/A အထက်မဟာသုခလမ်း၊ ကျီတော်အိမ်ရာ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ (၁၅ မျိုးအလှူ) ၅၀,၀၀၀
၁ ဒေါ်မြမြယု (အားထုတ်ဆဲယောဂီ) ကောင်းမှု။ အမှတ်(၆၈)၊ လှော်ကားလမ်းမ၊ (၇၀)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ။ ၁၀,၀၀၀
၂ မိခင် ဒေါ်မှဲ့အောင် (၂၃)နှစ်ပြည့်အား ရည်စူး၍ သမီး-မသက်သက်ခိုင်- မိသားစု။ (၁၄၁၉)၊ ဆေးရုံလမ်း၊ (၁)ထူပါရုံရပ်ကွက်၊ သာကေတ။ ၅၀,၀၀၀
၃ ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်၊ သား-ဦးသက်ဆွေ မိသားစု။ ၄၂/ မင်္ဂလာလမ်း၊ စမ်းချောင်း။ ၃၀,၀၀၀
၄ ဒေါ်ချိုချိုမာ ကောင်းမှု။ ကတ်ခိုကျေးရွာ၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း။ ၁၀,၀၀၀
၅ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ သမီး-မခင်မကြီး၊ မခင်မလေး အမွှာညီအစ်မ ကောင်းမှု။ အမှတ်(၂၆)၊ စိန်မေတ္တာလမ်း၊ ဟာမစ်တစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ၁၀,၀၀၀
၆ ဒေါ်အေးအေးမော် ကောင်းမှု။ ဘောက်ထော်၊ ရန်ကင်း။ ၁၀,၀၀၀
၇ ဒေါ်စီစီညွန့်၊ မောင်-ဦးသန်းထွန်း၊ သား-ကိုကျော်ဇောဝင်း ၊ သမီး-မသန်းသန်းဟန်၊ မြေး-မဖြူစင်ပိုဖြိုး၊ မဆုရည်မွန်သန့် မိသားစု။ ၂၀၈/စီ၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်း။ ၁၀,၀၀၀
(၂၀၁၇)ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း ဆွမ်းဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့သို့ လှူဒါန်းသော
နေ့စွဲ အလှူရှင်အမည် ပစ္စည်းအမျိုးအစား အရေအတွက် တန်ဖိုး
၅-၈-၂၀၁၇ ဦးသန်းစိုး (အကောင့်ကဲယား)
၁၈-၈-၂၀၁၇ ရွှေပုစွန်မိသားစု ကော်ဖီမှုန့် ၅၀ ထုပ် ၂၅၀၀၀၀
သြဂုတ်လအတွက် စုစုပေါင်း ၁၁၂၀၀၀၀
(၂၀၁၇)ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဆွမ်းဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့သို့ လှူဒါန်းသော
၁-၉-၂၀၁၇ အကယ်ဒမီဦးရဲအောင် မိသားစု ဆန် ၂၄ ပြည် ၂၄၀၀၀
၂-၉-၂၀၁၇ ဦးသန်းစိုး (အကောင့်ကဲယား)
၂-၉-၂၀၁၇ ရွှေပုစွန်မိသားစု ကော်ဖီမှုန့် ၅၀ ထုပ် ၂၅၀၀၀၀
၁၆-၉-၂၀၁၇ ရွှေပုစွန်မိသားစု ကော်ဖီမှုန့် ၅၀ ထုပ် ၂၅၀၀၀၀
၁၇-၉-၂၀၁၇ ဦးအော်ဖောင်း ကောင်းမှု ဆီ ၁၀ ပိဿာ ၅၀၀၀၀
စက်တင်ဘာလ အတွက် စုစုပေါင်း ၆၆၅၀၀၀